Coulda ငါ့ကိုရောက်ဖူး — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသလေးလံသောဖြစ်ပါသည်. ငါသည်ဘုရားသခင်၏ကောင်းသောသိ, သူထိန်းချုပ်ရဲ့, ဒါပေမယ့်ငါ့နှလုံးလေးလံသောဖြစ်ပါသည်.
ဖာဂူဆန်အတွက်ဖြစ်ရပ်များအပြီးပြီးခဲ့သည့်အပတ်က (ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဖို့နဲ့တုံ့ပြန်မှု), ငါသီချင်းတစ်ပုဒ်ရေးဖို့ထမ်းခံစားခဲ့ရ. အကြှနျုပျ၏ရည်မှန်းချက်မဆိုကြီးကျယ်သောထုတ်ပြန်ချက်များသို့မဟုတ်ကြေညာချက်များစေရန်မဟုတ်ခဲ့, ဒါပေမယ့်အရာအားလုံးငါ့ကိုခံစားရဖန်ဆင်းသောလမ်းဖော်ပြ. ဒါနဲ့ရေးသားခြင်းစတင်, နှင့်ဤထွက်လာ၏အဘယ်သို့သောအ. အကြှနျုပျ၏စိတျထဲတှငျထညျ့သှငျးပွောကွားခဲ့သောစိတ်ဓါတ်များခဲ့သည်: "ဒါဟာငါ့ကိုခဲ့ဖူးတဲ့နိုင်ဘူး။ "
ငါကခရစ်ယာန်တွေဤကဲ့သို့သောကာလ၌တုံ့ပွနျသငျ့ကိုဘယ်လိုအပေါ်တစ်ဖွဲ့လုံး post ကိုအဆင်သင့်ခဲ့, ဒါပေမဲ့အဲရစ်ဂါနာနဲ့ရော ပတ်သက်. သတင်းမနေ့ကပြီးနောက်, ငါနောက်ပိုင်းတွင်စောင့် post ဖို့ဆုံးဖြတ်. အခုအတွက်တော့, ကိုယ့်ငါလေးလံသောနှလုံးရှိသည်ဟုဆိုချင်. ငါအခုဆွေးနွေးငြင်းခုံသို့မဟုတ်အငြင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားမရယ်. ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုငါ့နာကျင်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုချင်.
ကအဲရစ်ဂါနာနဲ့ရောဗီဒီယိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကြီးကျယ်သောကွောငျ့ငါနာကျင်တယ်. ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့ကျွန်မပထမဦးဆုံး months ago ကစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ, ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအျောဟစျပါ၏. ဘဝကအဆင်းလှသောဆုလက်ဆောင်ဖြစ်ပါသည်, ထိုသို့ဘဝတစ်စုံတစ်ဦး၏ကိုယ်ခန္ဓာချန်မထားစောင့်ကြည့်ဖို့နောကျအရေးကွီးရဲ့ - တခြားလူကိုယူမယ့်အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. ငါထင်, "အကယ်စင်စစ်လူနှင့်အတူရှားမရနိုငျ. အနည်းဆုံးသူတို့တစ်တွေရုံးတင်စစ်ဆေးမှာသူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်များအတွက်ဖြေဆိုရန်ရှိသည်ပါလိမ့်မယ်။ "
ကအမေရိကရှိအနက်ရောင်သည်လူဖြစ်အန္တရာယ်ရှိမယ့်အကြောင်းကြောင့်ငါနာကျင်တယ်. ငါတယောက်တည်းကြောင်းကြေညာချက်လူတချို့မှထိုးစစ်ဖြစ်ပါသည်သိ, ဒါပေမယ့်ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျစစ်မှန်တဲ့င်.
အနက်ရောင်အသိုင်းအဝိုင်းနာ​​ကျင်နေသောကြောင့်ငါနာကျင်တယ်, သောကွောငျ့လူအမြားရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာတလျှောက် limping.
ငါရှိသောကြောင့်ငါအတိတ်အတွက်ရဲများကနှင့်အတူရှိခဲ့ဖူးတဲ့ထူးဆန်း Run-ins ၏နာကျင်တာပါ.
ငါသိတိုင်းအနက်ရောင်လူကိုအလားတူ Run-ins ရှိခဲ့ပါတယ်သောကွောငျ့ငါနာကျင်တယ်.
ငါသည်ငါ့သားငါ့အဘသည်ငါ့ကိုသင်ပေးခဲ့ရတယ်တူညီတဲ့အရာသင်ပေးဖို့ရှိသည်ကြောင့်ငါနာကျင်တယ်: သူတို့သည်သင့်အကြောင်းဘာမှသိမီက "လူတွေကသင်တစ်ဦးကိုခြိမ်းခြောက်နေယူဆလိမ့်မည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အဖြူမိတ်ဆွေများပြုပါထက်ပိုပြီးသတိထားဖ​​ို့ရန်ရှိသည်။ "
အာဏာပိုင်များကျွန်တော်တို့ကို၏ကျန်ဒဏျခတျသောအပြစ်နှင့်ကြေကွဲဖို့ကိုယ်ခံစွမ်းအားမဟုတ်ကြောင့်ငါနာကျင်တယ်. ရဲတပ်ဖွဲ့ဒုစရိုက်ကိုခေါ်တော်မူသောသူတို့ကိုမိမိတို့ကိုယ်ကအပြစ်ရှိတဲ့အခါ, ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလှည့်ကြပါ? ငါဖွင့်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးက သာ. ကြီးမြတ်ရှိသည်ကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၏, ဘုရားသခငျသညျအဆုံး၌တရားမျှတမှုကိုဆောင်ကြဉ်းပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နဲ့ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်ပါပြီ. ဒါပေမယ့်ငါနာကျင်မဟုတ်ပါဘူးမဆိုလိုပါ.
နားမလည်သောငါ၏အဆွေတို့အဘို့, နားထောငျဖို့အချိန်ကိုယူပါနှင့်စာနာကျေးဇူးပြုပြီး. "နားထောငျဖို့မြန်ဆန်ပြောဆိုရန်နှေးကွေး" ဖြစ်ခြင်းနှိမျ့ခခြွငျးနဲ့ရင့်ကျက်တဲ့အမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျအရာဝတ္တုခင်မှာ, နာကျင်သောသူတို့ထံမှနားထောငျနေတဲ့အခိုက်အယူ.
*သီခငျြးကိုမှသီချင်းစာသား Read ဒီမှာ
ယောရှုသည် • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒါကြောင့်ထွက်ကုန်အံ့ fam. ကိုယ့်သင့်ရဲ့နာကျင်မှုခံစားရ
Cisco သည် • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Coulda ငါ့ကိုခဲ့ !!
ယေရမိက • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:32 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါတူအတှေးအရှိခြင်းပြီ, နှင့် ပို. ပင်အသက်တာကိုမပယ်ရှားနိုင်ပါတယ်နှင့်လူတစ်ဦးသညျဘုရားသခငျကို သိ. မရှိဘဲသေစေခြင်းငှါဘယ်လို. ဒါဟာတကယ်ငါ့ကို scares ငါ့ကိုလည်းနာကျင် <3
Shana • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:37 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Marco • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:38 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်နှင့်အတူနာကျင်, ကိုယ့်အခြေအနေကနားလည် dont 100% ကိုယ့်တတျနိုငျသလမ်းမရှိသော. ငါယေရှုနှင့်သောငါတို့သည်တူသောအသက်ရှင်ရန်သင့်၏နားလည်ကြပါ. လမ်းလျှောက်, ရုန်းကန်နေရ, နာကျင်နှင့်အတူတကွကြိုးစားအားထုတ်လေ့ရှိ၏.
ဆမ် • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:40 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သင်၏နှလုံးမျှဝေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, နှင့်ဂီတကထည့်သွင်းရန်သင့်အခွက်တဆယ်ကို အသုံးပြု. များအတွက်. ဒါဟာလူတွေကိုသတ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသာ sickens ငါ့ကိုဝမျးနညျး, ဒါပေမယ့်လည်းအတိုင်းမသိများစွာသော (အများအပြားဝန်ခံခရစ်ယာန်တွေဟာအပါအဝင်) အဆိုပါနာကျင်နှင့်တရားမမျှတမှုကိုမြင်ရဖို့ငြင်းဆန်.
ဒါကြောင့်, တကယ်မှန်ပါတယ်, ခရီးစဉ်ကို. :(
ဆုတောင်း, ငါ့ညီအစ်ကိုတို့ဆုတောင်းပဌနာ & အစ်မတွေ.
MelissaMcKim • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:40 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Kirk က • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ့် calera ကနေဇာတိအမေရိကန်ဖြစ်ကြောင်းကို, ဥက္ကလာဟိုးမား. ငါ Choctaw အိန္ဒိယနှင့်စုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်အကြာဖာဂူဆန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကြားနာပြီးနောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုကြောင့်ခက်ခဲဒီနေ့ရဲ့အသက်အရွယ်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောမျိုးနွယ်မသာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကြောင့်ငါအဆိုပါအမုန်းနှင့်နာကျင်မှုနားလည်နိုင်သူတို့သညျဘုရားသခငျမြှင့်တင်ရန်, ငါတို့၏လွတ်လပ်ခွင့်ကိုယူပြီးဖြစ်ကြောင်းအရေပြားအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအရောင်ကိုမုန်းဘူး နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်များကြောင့်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်ပါကပိုမိုဆိုးရွားမယ့်ငါမူကားဤလောက၏ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ငါကအမြဲတမ်းဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ရုံယုံကွညျခွငျးရှိဖို့လိုကမကောင်းတဲ့သို့မဟုတ်ကောင်းပါတယ်ရှိမရှိအရာအားလုံးများအတွက်အစီအစဉ်ရှိပြီးငါတို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအရာတစ်ခုခုသည်သတိရဆုတောင်းဆုံးရှုံး အစိုးရကအပေါ်အလွန်အကျွံမှီခိုရမည့်အစား၏ဘုရားသခင်ဆီသို့ဦးတည်မြှောင် !
Tyler • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:47 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျညီအစျကိုခစျြ. ကောင်းမွန်သောရန်ပွဲတက်အောင်ထားပါ. သင်တို့အဘို့ဆုတောငျးလကျြ.
ယော်ဒန်မြစ် • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
တစ်ခုအံ့သြဖွယ်သီချင်း. လူငယ်တွေနားမထောင်ခြင်းနှင့်ထံမှသင်ယူရန်လိုအပ်. ခရီးစဉ်ကတက်သိမ်းဆည်းထားပါ
ယောလသည်ဗင်္ယာမိန် Neve ကျွန်း • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:52 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါဒီမှာယူဂန်ဒါနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းကိုသော်လည်းငါ့စိတ်နှလုံးကဲ့သို့ကောင်းစွာမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ပါသည်. ဒါကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာ. အဲရစ်နဲ့ရော, Tamir ဆန်, သူ Mike ဘရောင်း. ဒါကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာ.
DustinSimmons • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အရေးနှင့်အကြောင်းအနက်ရောင်ဘဝတွေကိုကိုယ်စားပြု nice အခွန်ဆက်ရကမ္ဘာ၏ရှေ့တော်၌သတိမမူမည်မဟုတ်ပါ. ကျနော်တို့ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာငါတို့အတိုခရီးစဉ်အတွင်းအပေါ်မှီခိုင့်သော system ကိုကျွန်တော်တို့ကိုမအောင်မြင်ခဲ့ပါ, ထပ်တလဲလဲ, ငါတို့သည်ငါတို့၏ချစ်ရသူများအတွက်ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြစ်လာအထိ. ငါငါတို့ရှိသမျှသည်သခင်ဘုရားပေါ်မှာငါတို့မျက်စိသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်တဦးတည်းကလူအဖြစ်ပိုမိုနီးကပ်စွာကြီးထွားနိုင်ပါတယ်မျှော်လင့်ပါတယ်, ဘုရားသခင်၏လူ. ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ခက်ခဲမှုအမျိုးမျိုး၌ခိုင်ခံ့နေဖို့, GAWVI နှင့်ခရီးစဉ် Lee က! ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကို!
Neal_Spencer • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:56 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကိုယ့်သင်တစ်ဦး Message ပေးပို့ချင်ခဲ့တယ်. လူသား, ရက်သတ္တပတ်၏အတိတ်စုံတွဲငါ့ကိုသိပ်ဖူးအငုံထွက်ဘို့ခက်ခဲတဲ့ပါပြီ. ငါရဲအရာရှိရယ်နဲ့ငါ့အကြိုက်ဆုံးကလူအချို့ကိုမြင်နေတကယ်ခက်ခဲတဲ့ခဲ့ရဲ့ (အဆိုတော်တွေဟာ, အဆိုတော်တွေ, မိတ်ဆွေများ, စသည်တို့ကို) သူတို့ရှိသည်လမ်းရဲတပ်ဖွဲ့အကြောင်းပြောဆို. အစပိုင်းမှာငါအမျက် ထွက်., စိတ်ပျက်, သူတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဘယ်လောက်ခက်ခဲတဲ့နားမလည်ခဲ့ဘူးဘယ်လိုကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူငြင်းခုန်ဖို့အဆင်သင့်, ကအချိန်များတွင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကြောက်စရာအကြောင်းကို… ကျွန်မတစ်ဦးပူဖောင်းတှငျနထေိုငျခဲ့ကွခန့်မှန်း, ပိုမိုငါပြဿနာအကြောင်းကိုဖတ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, ပိုငါသည်ငါ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားပြော, သငျသညျရဲများကအားဖြင့်ပိုပြီးရပ်တန့်ခဲ့ကြရတယ်ဘယ်လို y'all ရဲ့ status အဖတ်ပါ, သင့်ရဲ့ကားများကိုပိုမိုကိုရှာဖွေခဲ့သည်, ဒါကြောင့်အပေါ်ဒီတော့ထွက်… ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်တပြင်လုံးကိုဘာသာရပ်အကြောင်းကိုတကယ်စိတ်ဓာတ်ကျလာပြီတွေ့ရှိခဲ့.
ငါယာဉ်များရပ်တန့်ငါ့ကိုယ်ပိုင်လမ်းရှိ. အရမ်းပကတိအမှုအရာအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ကိုရပ်တန့် 80% အချိန် (သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှတ်ပုံတင်ရေး, အာမခံ, စသည်တို့ကို) ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့င် “အရောင်မခွဲခြားနိုင်ဖြစ်နေသော” လူတွေကိုဆက်သွယ်လမ်း. ထိုအခါအခြား 20% ကားကိုငါရဲအရာရှိရဲ့လေ့ကျင့်ရေးခြင်းမရှိဘဲတစ်စုံတစ်ဦးကိုယုံကြည်လိမ့်မယ်လို့အလွန်အမင်းသံသယများနှင့်သိသာတစ်ခုခုမပါလျှင်အချိန်ကိုငါကြီးအတူတူပင်မစ်ရှင်တွေနဲ့တာဝန်ပေးဆောင်ရွက်လျှင်လိုက်တယ်ထင်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်. ငါလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပါအဆိုပါအချက်ငါဘက်မလိုက်နေဖို့ငါ့အကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဖို့ကြိုးစားသောဖြစ်ပါသည်, အဲဒါကိုကြည့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကကားတစ်စီးကိုကျော်ဆွဲမရင့်နိုင်အောင် “အသေအချာမသိ” သို့မဟုတ်ပါကကားမောင်းပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်သောကွောငျ့ “တစ်လူရမ်းကားများကဲ့သို့”. အရာဖြစ်ပါသည်, ငါသည်ငါ့အလုပ်လုပ်နေခဲ့ကြရတယ်ဘယ်လိုတော်တော်လေးပျော်ရွှင်မိပါတယ်, နှင့်အဘို့ဘုရားသခငျသညျခြီးမှမျးပါ. ငါသော်လည်းစိတ်ဓာတ်ပေါ့ဘယ်မှာငါခန့်မှန်း, ငါသည်ဤ BIG ကိစ္စ၌ဤမျှသေးငယ်တဲ့ခံစားမိကြောင်း. ပိုမိုငါအခြေအတင်ဆွေးနွေး, ပိုမိုငါအသေအချာမသိရှာဖွေမှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းတရားများစသည်တို့ကိုသူတို့၏ဇာတ်လမ်းများအကြောင်းငါ့ကိုပြောပြငါ၏အ Black နဲ့အာရပ်မိတ်ဆွေများနားထောငျပေး. ပိုငါကဒီပြဿနာကိုကူညီဖို့ဘယ်လိုမျှမစိတ်ကူးခဲ့သဘောပေါက်.
ငါဆုတောင်းပဌနာဖို့လိုတယ်ကိုသိရ, ငါသည်သူတို့၏အကောင်းဆုံးကြိုးစားသူကိုအထဲကအဲဒီမှာကောင်းသောရဲများကအများကြီးကိုသိရန်နှင့်လူအပေါင်းတို့သည်လက်ျာဘက်အကြောင်းပြချက်အဘို့ဤအလုပ်ချစ်သောသူဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပါပြီ… သို့သော်လည်းငါသည်ငါ့ကိုလူ့မာနထောင်လွှားဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ဤကိစ္စကိုအမေရိကတစ်လွှားဆက်လက်နေချိန်မှာပျင်းရိမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လိုလားခန့်မှန်း. လူသည်ကိုယ့်ခဲယဉ်းဒါဟာင်… ဒါကြောင့်, ငါသည်ဤမှတ်စု၏ရည်ရွယ်ချက်ပြောဖြစ်ပါတယ်ခန့်မှန်း, ငါသည်သင်တို့၏နာကျင်မှုဖူးအငုံထွက်ခံစားရတယ်. ငါအသေအချာမသိရဲတပ်ဖွဲ့အလုပ်အကြောင်းမဲ့ပြီမူသောငါ့မိတ်ဆွေအများအပြား၏နာကျင်မှုခံစားရ. ထိုသို့ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာများအတွက် / တက်သည်စေသည်, ငါသည်သင်တို့ကိုတဦးတည်းအားဖြင့်တဆင့်ထားပြီးပြီဆိုမသက်မသာခွအေနကေိုအဘို့တောင်းပန်ချင်. နှင့်ဤမှတ်စု၏ဒုတိယတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲဆုတောင်းပဌနာတောင်းဆိုမှုကိုဖြစ်ပါသည်, ငါ့ဦးခေါင်းတက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ငါ့အသိုင်းအဝိုင်းလေတစ်လမ်းကိုရှာဖွေ, လူတိုငျးအတှကျအလုပျ၏ငါ၏အရာအရပျ. သငျသညျပြဿနာတစ်ခုမြင်သင်က fix ဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူးတဲ့အခါမှာဒါဟာစိတ်ပျက်စရာရရှိသွားတဲ့.
quick နောက်ဆုံးအချက်, ငါသီခငျြးလူကိုကိုချစ်. ဒါဟာသင်ကောင်းသောရဲများကဖို့ကြွေးကြော်သံထုတ်ပေးခဲ့သည်ရှိရာစတုတ္ထကျမ်းပိုဒ်အတွက်မျက်ရည်ကျဖို့ငါ့ကိုဆောင် သွား.. သောလူသားများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဒန်ယဲလ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 11:59 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤသူကားငါ၏နှလုံးကိုထိမိ. ရိုးရိုးသားသားပွင့်လင်းသင်တို့အဘို့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါသည်သင်တို့ကိုကာကွယ်ပေးရန် ယူ. ကြိနျဆိုသညျခြီးမွှောဝတ်ပြုဖို့ရွေးချယ်သူတစ်ဦးဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့မတ်ေတာရှိသောယောက်ျားသည်ဖြစ်ခြင်းဘို့သင့်ကိုနှုတ်ဆက်ကြ၏. ငါသည်သင်တို့ကိုသင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်အတွက်အလင်းတိုင်လိမ့်မည်နှင့်သင့်နှိမျ့ခခြွငျးဂုဏ်ပြုနှင့်ကျေးဇူးတော်သင်သည်ထိုသူတို့နှင့်အတူသတငျးကောငျးမျှဝေဖို့အခွင့်အလမ်းရှိစေခြင်းငှါအခြားရဲတပ်ဖွဲ့အရာရှိများအပေါ်ထွန်းလင်းမည်ဟုဆုတောင်းပဌနာ. ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်မှတဆင့်ပိုပြီးအသွင်ပြောင်းတော်များနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုနိုင်လိမ့်မယ်. ဘုရားသခင့ဒီအမှန်တရားကသင်၏အသက်တာ၏လက်ထက်ကာလပတ်လုံးဝေမျှဖို့သင့်လက်ခြေပါးစပ်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသော. အခုဆိုရင်သင့်မစ်ရှင်ကိုသိရ! #telltheworld #lovehard #overcome
Aj_cthingswell_FbAjHowardbentleyCaldwell • ဧပြီလ 8, 2015 တွင် 10:41 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး! ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မယ့်သီချင်းကိုနက်ရှိုင်းပြီးအလွန်နှလုံးပါခဲ့ပေမယ့်မှတ်ချက်ကယ့်ကိုနေရာတစ်နေရာ hit. တစ်ဦးကရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပြန်သော်လည်းငါရှိသောကြောင့်ငါသည်ငါ့အလုပ်မှာဓာတ်ငွေ့ရရှိရန်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်သည်တစ်ပြည်နယ် pump မှာဓါတ်ငွေ့ရတဲ့ခံခဲ့ရသည်နဲ့ကျွန်မရဲအရာရှိအဖြစ်ကောင်းစွာဓာတ်ငွေ့ရတဲ့ငါစဉ်မှာတင်းမာနေလူတစ်ဦး၏ကွောကျရှံ့ခွငျးထဲကအမရထလိုမွငျခငျြတစျဦးစီကြည့်ရှုမယ်လို့ သူတို့ထဲကကြောက်စေခြင်းငှါသူတို့ကိုမသိပေမယ့်ဒီမသက်မသာခံစားရခြင်းဖြစ်ခဲ့ပါသည်, 90 ရဲ့တက်ကြီးထွားလာငါတကယ်သူရဲကောင်းများနှင့်ခရီးစဉ် lees တူသောအတွေ့အကြုံများမှသီချင်းအတွက်ခေါင်းစဉ်အပေါငျးတို့သညျသူတို့ကိုငါ့အမြင်အာရုံသူရဲကောင်းများသည်အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ရဲအရာရှိဖြစ်သောကြောင့်,. အပျက်သဘောဆောင်သောလမ်းအတွက်ပဲရိုးရှင်းစွာသူတို့အမှန်တကယ်ထိုနေ့၏အဆုံးမှာတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကဲ့သို့သူတို့ကိုမမြင်ရသော်လည်းလို့ပဲ။. တစ်ဦးကလူ့ဖြစ်လျက်ရှိ။. သင်တို့ကိုငါအများအားဖြင့်မမြင်နိုင်ကြဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူကငါ့ကိုကြောင်းအဖြစ်သူတို့ကိုကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့သောဘုရားသခငျကိုကြေးဇူးတငျ (ကောင်းစွာအစဉ်အမြဲငါအရမ်းရယ်ရတယ်မြင်သည်မဟုတ်) ရုပ်ပြစာအုပ်တွေထဲမှာအရပ်သားတွေသူရဲကောင်းများအဘို့ဆုတောင်းပဌနာ. ထိုသူတို့အားဖြစ်ရပ်များထဲက birthed ခဲ့ရာင်… သူတို့ထဲကငါ့အတင်းမာမှုနှင့်ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အလယ်၌ဆိုးသောနေ့ရက်ရှိခြင်းသို့မဟုတ်တစ် hoody အတူပြည်နယ်ဓာတ်ငွေ့စုပ်စက်မှာငါ့အလူတစ်ဦး၏သူတို့ရဲ့အမြင်ပင်ကိုကွောကျရှံ့သောကြောင့် (ဒါကြောင့်အထဲကအအေးင်သော်လည်း), တစ်ခုထငျရှားအားလုံးအဖြူရောင်ဗင်အတွက်ဓာတ်ငွေ့ချပြီး (ငါပညာတတ်မသန်စွမ်းတစ်ဦးချင်းစီအလုပ်လုပ်ဘို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးသည်ကိုမသိမ),ဒီသနားခြင်းကရုဏာစိတ်ကိုသူတို့လူတစ်ဦးမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲနှင့် / သို့မဟုတ်မိမိတို့၏အသက်အဘို့ကြောက်ရွံ့ဂုဏ်သတင်းထွက်အသုံးအနှုန်းထဲကလုပျဆောငျဖို့သူတို့ကိုနှိုးဆော်ခြင်းငှါကြောင်းဖြစ်ခြင်းငါ့ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်ထိုသူတို့အဘို့ဆိုးရွားခံစား လာ. ,. ရှင်းလင်းစွာခွဲခြားဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့်သူနိုင်အောင်မယ့်အခါ, အရပျယူနိုငျအရာကိုအဘယ်သူသိနိုင်သောကြောင့်ခရစ်တော်၏ကိုယ်တဦးတည်းအညီပေါ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေဒါကြောင့်ကွဲကွာကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရန်သူတစ်ဦးလှည့်ကွက်ကြောင်း၎င်း၏ရုံတက် jacked အခွအေန. ဒါပေမယ့်နည်းနည်းသူမလာသောအခါသူကဖန်တီးကြောင်းကိုသိရပါဘူး 23 ဤနောက်ဆုံးနှင့်မကောင်းသောအရက်အတွင်းပိုပြီးအဘယ်အရာကိုမျှသို့မဟုတ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုထက်လျော့နည်းဘာမျှမမှီဝဲဆညျးကသူကိုနှစ်အရွယ်အထီးဆုတောင်းပဌနာသူရဲ. Neal သင်တို့ကိုငါဖွင့်နှိမ့်ချအမြဲတည်သည်အခွအေနေသင်တို့သည်နောက်ကိစ္စဝင်အံ့သောငှါလေထု theMmost မြင့်သောဘုရားသခငျ၏ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်သင့်မျက်နှာသာအတွက်ဝင်မျှော်လင့်ဆုတောင်း. မင်္ဂလာ Be!
Kevin • ဒီဇင်ဘာလ 3, 2014 တွင် 11:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟေ့ခရီးစဉ်။. ဘုရားသခငျ့သငျသညျမှာမိမိလက်တယ်အကြောင်းမရှိသင်ရောက်ခဲ့၏မဟုတ်ဘူး. ငါအရာအားလုံးကိုအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပျက်ကြောင်း belive. ဤသည်ပိုပြီးလူတို့နှင့်အတူချိတ်ဆက်ရန်သင့်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထို့နောက်သင်သည်အစဉ်အစိတ်ကူးပါလိမ့်မယ်. လူတွေကသူတို့ပဲတလျှောက်လာရန်သူတို့ကောင်လေးလိုအပ်ပါတယ်နှင့်ဂီတကနေတဆင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရား spred အဖြေတွေကိုရှာဖွေနေပါသည်, ရုံကျမ်းစာလေ့လာမှုသို့မဟုတ်ထိုင်ခြင်းနှင့်ကော်ဖီသောက်ကျော်နှလုံးတစ်ဦးနှလုံးရှိခြင်း. ငါအန်ဒီ Mineo ထားအဖြစ်ပြောပါဖို့ကြိုးစားနေတာပါအဘယျသို့ခန့်မှန်း “သူတို့ကျွန်တော်အဲဒီမှာအလင်းဖြစ်ကုန်အံ့ပြသကြကုန်အံ့မှ display ကိုအပေါ်သူ၏ဘုန်းအသရေကိုမထားကြပါလျှင်သိပါဂုဏ်နမည်သို့မည်ပုံ livin မှောင်မိုက်ကမ်ဘာပျေါတှငျကျနော်တို့”.
ဤ • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 12:03 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အားလုံးသင့်ရဲ့ဂီတမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်. သင်နှင့်မြေတပြင်လုံး 116 ကလစ်. ဘုရားသခင့အမှန်တကယ်ငါ့ထံသို့စကားပြောဖို့ရန်သင့်အားယောက်ျားတွေသုံးပြီးနှင့်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်များ၏ကျန်ရှိပါသည်, ဒါပေမယ့်အစဉ်အဆက်လာရန်! ငါပေးပါ့မယ်ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်, ကြံရွယ်သည့်အတိုင်းဖြစ်ပါက, သင်သည်သင်၏အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင်ဖော်ပြထားသောသူတို့ကိုကြမ်းတမ်းရပ်ကွက်၌သင်တို့အထဲကကိုကူညီထွက်လာ.
Quentin ဟော်လန် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 12:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အစွမ်းထက်သောသီချင်း…. ငါ့နှလုံး၏ဖခင်ဖြစ်ခြင်းအခုအချိန်မှာမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ပါသည်3ငယ်ရွယ်အာဖရိကန်အမေရိကန်ယောက်ျား. သူတို့ဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတဖြစ်လာမယ့်အခွင့်အလမ်းရှိပေမယ့်လည်းသူတို့ကအချို့သောအခြေအနေများတွင်လုပ်ဖို့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါနားလည်သဘောပေါက်သိမြင်…
ထိခိုက်နာကျင်ဖို့ ok ဒါဟာင်. ကမ္ဘာကြီးကိုဖုန်နှင့်ပြည့်ဝ၏….
ရေ (ဝိညာဉ်တော်သည်) နှင့်သားတော်ကို (ယရှေုသညျ) လှပသောအရာတစ်ခုခုကြီးထွားဖို့ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်….. ငါမြော်လင့်ကိုယ်တော်၌တည်ရှိ၏
Tjay • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 12:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
နှိမ့်ချလက်ပေါ်မှာအစက်အပြောက်. ဒါဟာလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ကိုရှင်းလင်းစွာဖြတ်ပြီးအမှတ်ရရှိသွားတဲ့. အဆိုပါအခြေအနေများငြင်းဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ငါ့နှလုံးမိုးသည်းထန်စွာဖြစ်ပါသည်. ငါအဖြူရောင်အထီးပေါ့ဒါပေမယ့်အရောင်ကလူန်းကျင်ကြီးပြင်း. တောင်မှအနီးကပ်မိသားစုအရောင်သည်. ငါ Providence အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ရပ်ကွက်တကြီးပြင်း, RI ကရဲ့အနိမ့်တောင်ဘက်ခြမ်းနှင့်တိုင်းပြည်အနှံ့ဖြစ်ပျက်သည့်မတရားမှုကိုကောင်းစွာသတိပြုမိပါတယ်. သို့ “ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်အစေခံ” တိုင်းအရာရှိများအပေါ်ဖြစ်သင့်အစိမ်းရောင်ရှိမရှိစိတ်ထဲ, ပြာသော, အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဖြူ. လူတွေကမပြောင်းဘူးဆိုရင်သမိုင်းသာသူ့ဟာသူကို repeat… ငါသည်ဤအဆုံးသတ်မှကြွလာမယ်လို့မျှော်လင့်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့သမျှသောဤလူငြိမ်းချမ်းရေးရှာတှေ့နိုငျ. #AllLivesMatter
ကဲန် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 12:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ၏အ bro ဦးသည်းခံ, သင့်ရဲ့ post ကို readin jus မျက်ရည်၌ငါ့ကိုခဲ့. ima 25 တစ်နှစ်မက္ကဆီကန်အဟောင်းနှင့်ဒါကြောင့် mike အညိုရောင်ခေါ်ဆိုခကတည်းက burddened ခဲ့တာကိုငါ့နှလုံးသားများ Man, ငါ၏အ Popz ဤကဲ့သို့သောရဲကိုမြင်လျှင်ပစ္စည်းပစ္စယငါ့ကိုစိတ်ပူစေသည်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ကိုဖုံးလွှမ်းသောသူသိပါ. ထိုအခါယနေ့မြင်နေငါ cryd bro jus နှင့်စပါးရိတ်ရာကာလအဘို့ပေါ်ထွန်းစေတဲ့အလုပ်သမားဖြစ်ဆုတောင်းပဌနာ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်သစ် bro letz ကိုယ်တော်၌နှိပ်စောင့်ရှောက်မယ့်! ဦး bro Love
meldd • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 12:33 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ကြီးပြင်းလာသည်, ငါငါ့ကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုန်းကျင်နေဆဲခဲ့ကြောင်းထင်စေမယ်လို့ဖြစ်ပျက်ဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး. ငါသည်ခပ်သိမ်းသောလူမျိုးကိုချစ်နှင့်ငါ့တမြို့လုံးအတူတူပင်ခံစားခဲ့ရ (သို့မဟုတ်ဒီတော့ငါထင်).
ယခု, ရှိသမျှတို့ကိုငါသည်ဤအဖြစ်ဆိုးကိုတွေ့မြင်&အမျက်ဒေါသ၏ကြိမ်တိုင်တိုင်. ငါတော့ဘူးငါ့ကိုပတ်လည်ကလူကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူး. ဘယ်လိုဒီအားလုံးတို့ကိုရှောက်သွားလာခဲ့ပါဘူး? ကျနော်တို့ကဒီအတိတ်ခဲ့ကြသည်ထင်ခဲ့တယ်။.
လီနာ • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 12:36 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အစွမ်းထက်: Lyrics နှင့်ဂီတ. ငါတံဆိပ်များနှင့်အတူလိုက်မသွားဘူး, ငါတို့ရှိသမျှသည်အပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူ၏ဘုန်းအသရေပျက်ကြ. သို့သော်လည်းငါသည်အဖြူရောင်မိန်းကလေးဖြစ်၏. ငါအရောင်အရေးကြီးသော-ကဤတိုင်းပြည်နှင့်ကမ်ဘာပျေါတှငျသောနေရာများ၌တည်ရှိ၏မဟုတ်ပါဘူးထင်ချင်ပါတယ်သလောက်. အပြစ်ရှိသောသူကဲ့သို့အ: က coulda ငါ့ကိုခဲ့. ဆင်းရဲသောအဖြူမိန်းကလေးအဖြစ်: ဖြစ်နိုင်စရာ, ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်မဟုတ်. ထိုရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းဖြစ်ပါသည်.
ငါသည်ဤသီချင်းအဆုံးသတ်ပုံကိုကိုချစ်: ငါမြော်လင့်ကိုယ်တော်၌တည်ရှိ၏. လာသောအခါငါတို့မြော်လင့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်လက်ခံမှုလာ, ယုံကြည်ခြင်း, နှင့်ချစ်ခြင်းကိုယ်တော်၌တည်ရှိ၏.
Miguelperez • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 12:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါဟာသင်ရေးသားခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သောလှပသောအရာဖြစ်၏ဒါသစ္စာဝါဒီနဲ့ကျွန်မသင်တို့သည်ဤကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. သင်၏နှလုံးအပေါ်အလေးချိန်ခဲ့ရာမှတုန့်ပြန်ကြောင်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ထိုသို့ U.S ဝန်းရံသည်ဟုအကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များမှအကြှနျုပျ၏မကျြစိကိုပိုပြီးဖွင့်လှစ်မယ့်. အဖြစ်အရေးကြီးသောသတင်းကိုလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်မထီမဲ့မြင်မပြုရည်ရွယ်ထားတဲ့. သငျသညျ lee trip ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
Damian • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 1:01 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
မက် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 2:13 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
လူသား, ငါသည်သင်တို့၏စကားသည်ယနေ့ညဖတ်ပါ. သူတို့ဟာခက်ခဲငါ့ကိုဝင်တိုက်. ဤတိုင်းပြည်များတွင်ဤသံသရာ…ငယ်ရွယ်အနက်ရောင်ယောက်ျားပစ်မှတ်ထားကျောက်စိမ်းရဲများကသူတို့တစ်တွေပရိုဖိုင်းကို fit ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့…ငယ်ရွယ်အနက်ရောင်ယောက်ျားပစ်မှတ်ထားခံရငြီးငွေ့လာပြီနှင့်ရပ်နေနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတက်သည်စကားပြော…
သင်မြင်တဲ့အတိုင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုလဲသဘောသဘာဝကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို compartmentalize ဖို့စိတ်သဘောထားတတ်၏. ကလေးတစ်ဦးအဖြစ်ခွေးအဖြစ်ကိုက်တစ်စုံတစ်ယောက်က, များသောအားဖြင့်လူအပေါင်းတို့ခွေးတစ်ကောင်တစ်ခုခြင်းကိုမနှစ်သက်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာ…တစ်ခုခုကိုကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်သို့မဟုတ်မုန်းတီးမှုအဖြစ်. ဒါကကျော်လွှားရန်ဒါခက်ခဲနိုင်ပါတယ်, အဲဒီခံစားချက်တွေကိုခွင့်ပြုသောကြောင့်,…တစ်ခါတစ်ရံသူတို့ကိုအားပေးမည်ဟုနှင့်သေးဆင်ခြင်တုံတရားသူတို့နှင့်အတူအစာကျွေး.
Tripp, ငါအဖြူရယ်. ငါ၏အ 4th တန်းနှစ်တိုင်အောင်, ငါတောင်ပိုင်းအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ထဲမှာအများစုအနက်ရောင်ရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်အဖြူလေးတွေ၏သေးငယ်တဲ့လက်တဆုပ်စာ၏တစ်ဦးအဖြစ်ကြီးပြင်း. ငါ့အလိုရှိသမျှမိတ်ဆွေများကအနက်ရောင်ခဲ့ကြသည်. ထိုအခါ, ကျနော်တို့ Tennessee ပြည်နယ်သို့ပြောင်းရွှေ့. ငါကျဆင်းသွားတဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတိုက်ပွဲဝင်ဘို့ထိုနှစ်တွင်ကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ရုံးခန်းမှသုံးကြိမ်စလှေတျတျောတယ် “N-စကားလုံး”…4 တန်းကျောင်းသူ…ကလေးတွေပြီးသားခွဲခြားနှင့်အခြားသူများအပေါ်ကိုဆင်းကြည့်ရှုရန်သွန်သင်ခဲ့….ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသားအရေအရောင်၏. အဲဒီစကားလုံးငါ့ကို infuriated…အမှတ်ဖို့ငါကပြောနေဘို့ခံတွင်း၌သငျလာကြတယ်မယ်လို့. ဒါဟာနေဆဲငါ့ကို infuriates…ကိုယ့်ယခုလာကြတယ်အစားဆုတောင်းပဌနာ.
လူသား, ကျွန်မအသားအရေအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအရောင်နဲ့အရိပ်၏ဆွေမျိုးသားချင်းများ….နှင့်, ဘာလဲသိလား? ငါအိုင်တီဂုဏ်ယူပါတယ်. ကျွန်မရဲ့မိသားစုသစ်ပင်အမေရိကတိုက်ကြီးမြတ်စေသည်အတိအကျကဘာလဲ. ကျွန်မရဲ့မိသားစုကအမေရိကန်အရည်ပျော်အိုး IS. ကျွန်မရဲ့မိသားစုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပြီး, သူတို့ကိုငါအားလုံးကိုချစ်.
တစ်ဦးကစုံတွဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း, ငါအကုန်လုံးကွာရှင်းမှတဆင့်နဲ့ငါ့ကိုယ်ပိုင်မိုက်မဲရှောက်သွားလေ၏, ဘားနောက်ကွယ်မှတချို့အချိန်ဖြုန်းတက်အဆုံးသတ်နှင့်ယခုပြစ်မှုမှတ်တမ်း. ကျွန်မပထမဦးဆုံးလက်မကောင်းတဲ့ရဲများက၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမြင်ရပါတယ်. ယခု, အချိန်မရွေးတစ်ဦးကင်းလှည့်တဲ့ကားငါ့နောက်သို့ရရှိသွားတဲ့တစ်ခုသို့မဟုတ်ရဲငါ့ကိုအတိတ်လမ်းလျှောက်, ကျွန်မစဉ်းစားနေပါတယ်, “သူတို့ကဒီအချိန်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဂုဏ်နနေကြတယ်? သူတို့ငါ့ကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မယ့်အကြောင်းပြချက်ပေးစေခြင်းငှါဆွဲထုတ်ဘယ်အရာကိုဂုဏ်နနေကြတယ်. သူတို့သည်သင့်စနစ်အတွက်နေကိုသိတစ်ချိန်ကကြောင့်,…သငျသညျဘဝများအတွက်ပြစ်မှုဆိုင်ရာပါပဲ။” ပြီးတော့ငါကျဉ်းမြောင်းတဲ့စိတ်နှင့် bigoted ဖြစ်ခြင်းများအတွက်နောင်တရရန်ရှိသည်. သူတို့ကတဦးတည်းမကောင်းတဲ့ပန်းသီးဟာစည်း့ဝှက်ချက်များကိုပျက်စီးစေလို့ပြော, သို့သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ပန်းသီး၏ပုံရိပ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ဘူး…သူ့ပုံရိပ်ကိုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်. အဲဒီတစ်ခုခုရေတွက်တယ်ရဲ့, မှန်သော?
ရိုးရိုးသားသား, bro…သင်၏စကားဖတ်သူတို့အပျေါမှာတှေးတောဆငျခွနှင့်ငါ့ဘဝအပေါ်ကိုပြန်ရှာနေပြီးနောက်….ငါ့ကိုရောက်ခဲ့ဖူးနိုင်, လွန်း.
ငါပေါ့ပေါ့မဆိုသို့မဟုတ်သင့်စကားများဆွဲငင်အားကနေယူ. ဒါဟာဆန့်ကျင်ဘက်င်. ပြဿနာတစ်ခုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ပြဿနာအနက်ရောင်မဟုတ်ပါဘူး & အဖြူရောင်ပြဿနာ. လူတိုင်းရဲ့ကွဲပြားခြားနားသည်နှင့်ကျွန်တော်တှငျနထေိုငျဒီပြိုလဲကမ္ဘာ၏သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကျိုးကြောင်းညီညွတ်မှမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဘဝအတွေ့အကြုံများအပေါ်ဆွဲယူလာသည်. အဆိုပါပြဿနာကိုကားဒုစရိုက်ဖြစ်၏. ငါတို့ရှိသမျှသည်ကအပြစ်ရှိကြောင်းများမှာ. ကျွန်မအခုသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနာခံဖြစ်ကြပြီးအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေကူညီရန်ကြိုးစားနေသည်ဟုလူတို့သညျအထဲကအဲဒီမှာရှိပါတယ်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်း. ငါသည်ငါ့ဆုတောင်းယနေ့ညသင်နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောအခြားသူများကိုရရှိပါသည်. အချစ်များစွာ.
~ Mac အတွက်
မက် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 2:17 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
“သို့သော်အထက်တွင်ထံမှပညာကိုပထမဦးဆုံးသန့်စင်ဖြစ်ပါသည်, ထို့နောက်သင့်တင့်, အမျိုးအနွယ်ကောင်းသော, အကြောင်းပြချက်မှဖွင့်လှစ်, ကရုဏာတရားနှင့်ကောင်းသောအသီးကိုသီးနှင့်ပြည့်ဝ၏, ဘက်မလိုက်ခြင်းနှင့်ရိုးရိုးသားသား. ဖြောင့်မတ်စပါးရိတ်ရာကာလငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်သောသူတို့သည်ငြိမ်ဝပ်စွာကြဲခြင်းဖြစ်ပါတယ်။”
ဂျေမီ • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:18 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါက diggin တယ်. သငျသညျ Tripp ကနေလာမယ့်အနေအဘယ်မှာလုံးဝတွေ့မြင်.
Stephlandry09 • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 6:42 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါလူငယ်တစ်ဦးအဖြူအမြိုးသမီးတင့်ကတည်းကငါမှာဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဆက်စပ်လို့မရဘူးသော်လည်း, ဤအမှုသည်ငါ့မျက်စိမှမျက်ရည်ယူဆောင်. ငါ့စိတ်နှလုံးသည်မြေတပြင်လုံးဖာဂူဆန်စမ်းသပ်ထုတ်မှတစ်ဆင့်လေးလံသောခဲ့. ဒီအပေါ်စကားပြောနှင့်သင့်အတွေ့အကြုံများကိုမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
AaronCrim • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 7:23 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျခရီးစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငါသညျဤအထောကျအကူဖြစ်တွေ့ရှိ. ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက် Wv ကနေအဖြူခရစ်ယာန်ဖြစ်ကြောင်းကို, ငါသည်ဤဖြစ်ရပ်များ၏စေရန်အဘယ်အရာကိုကျော်ရုန်းကန်င့်. စဉ်းစားရန်အဘယ်အရာကိုတကယ်သေချာမ, (သူတို့ကယ့်ကိုတိုက်ရိုက်ငါ့ကိုမထိခိုက်သကဲ့သို့) ငါသို့သော်နာကျင်ငါ့ညီအစ်ကိုတို့, ညီအစ်မတွေရဲ့ဤမျှလောက်များစွာသောကြည့်ဖို့ဒါဝမ်းနည်းပက်လက်ဖြစ်ခဲ့ခြင်းနှင့်ခှဲဝေခဲ့ကြ. ကြှနျတေျာ့နိုင်ငံသား၏ဤမျှလောက်များစွာသောနာကျင်ကြည့်ဖို့ဝမ်းနည်းပက်လက်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တဖန် Tho ဒီငါ့ကိုအနည်းငယ်ပိုနားလည်ကူညီပေးခဲ့ငါ့ကိုပိုကောင်းစည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်ဆုတောင်းဖို့ဘယ်လိုသိရန်ကူညီပေးပါမည်. ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
jeanine pinkney • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 7:29 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒီသီခငျြးကိုအဘို့အသင်တို့သည်ဤမျှအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါ့အစ်ကိုကဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဘို့ဤနံနက်က link များနှင့် im အမှန်တကယ်ကျေးဇူးတင်ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူ. ငါသားကောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမှ, ငါသည်ငါ၏သား Rashad Pinkney ဒီဇင်ဘာလဆုံးရှုံးခဲ့ရ 21,2013. မရှိသောသေနတ်အကြမ်းဖက်မှုမှ. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝတွေကိုကြာဘယ်လောက်ရှက်စရာင်. Black ကရာဇဝတ်မှုအပေါ်က Black ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရပ်ရွာထဲတွင်အသက်တာ၏ပုံမှန်နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပျို၏ဤမျှလောက်များစွာသောအသက်အဘို့အချိန်တန်ဖိုး. ငါဝမ်းမြောက်စရာခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့်အစဉ်မပြတ်ငါကိုထိခိုက်စေ, အဘယ်သူမျှမခံမှုရှိသောကြောင့်, ငါကိုထိခိုက်စေ, ငါနားမလည်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ထိခိုက်, ကိုယ့်ကိုထိခိုက်စေ!!! သို့သော်လည်းငါသည်နေဆဲအသက်ရှင်နှင့်ငါ၏ဘုရားသခင်ကိုချစ်!!!
TerryMiller • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 7:40 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်သိလား, ခရီးစဉ်ကို, ဘာမှပြဿနာကို၏မြေတပြင်လုံးတိမ်အနက်တွေအကြောင်းတလမ်းတည်းဖြင့်သို့မဟုတ်အခြားမပြောနိုင်ပါဘူး. ငါလူဖြူရယ်. အနက်ရောင်လူကိုမသကဲ့သို့ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမမြင်မိပါဘူး. ငါကတဆင့်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီမဟုတ်. ဒါပေမဲ့, ငါသိကြဘူးဘာလဲ, ထိုသီချင်းဖြစ်ပါတယ်. ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်ဖြစ်ခြင်းနိုင်စွမ်း, ငါထင်တယ်, သင့်လျော်သောလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ရာထူးတိုးလျှင်. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ya'll ကြောင်းနှင့်အတူအမှတ်အပေါ်တော်တော်လေးထင်ရ, ဒါရုံချီးမွမ်းယူ, dude. အဘယ်သူမျှမ, ငါတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးဝမ်းနည်းဖွယ်အခြေအနေအပေါ်အမြတ်ထုတ်ရန်သင့်တယ်ထင်ကြဘူး. ဒါပေမဲ့, သင်ကသငျသညျ သိ. ဖူးသောအရာကိုရဲ့ယုံကြည်လျှင်, ထို့နောက်သူကအတူပြေး. ဒါဟာသင်ဒီမှာအကြောင်းပြောနေတာနေတာအစစ်အမှန်ဘဝပစ္စည်းပစ္စယင်. သင်တို့ရှိသမျှအနုပညာရှင်တစ်ဦးစုပေါင်းအယ်လ်ဘမ်သို့မဟုတ်စုစည်းဖြန့်ချိသင့်ပါတယ်ရောက်ရှိ. ဒီတစ်ခါလည်းပင်တစ် e.p. လောကအနုပညာရှင်တွေစားပွဲပေါ်မှာမှဆောင်ကြဉ်းအံ့သောငှါလူအပေါင်းတို့သည်အဆိုးမြင်စိတ်တွေမရှိဘဲအကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုအသိအမြင်ကိုယူခဲ့. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒီနေရာမှာအကြီးအလုပ်!
ဟင်နရီ Strozier • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 8:00 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဂရိတ်သီချင်း! ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူသင်၏နှလုံးမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒါကဒါကြောင့်ဝမ်းနည်းဖြစ်ပါသည်! ငါသားကောင်များ၏မိသားစုများဘို့ဆုတောင်းကြလော့!
လူးဝစ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 8:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Alasdair • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 8:15 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဆိုပါ drivel ခရီးစဉ် Farrakhan မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
Jacqueline lugo • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 8:42 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤလောကကိုအစိုးရသောနညျးလမျးမြားအဘို့အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသလပ်ချိန်. အလွန်အကျွံမတရားမှုကို! အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသလေးလံသောဖြစ်ပါသည်. သခင်ဘုရားသည်မိမိလူဆိုကြသည်မှကြွလာသောအခါငါနေ့၌စောင့်ဆိုင်းတယ်. နောက်တဖန်မနာကျင်မှုရှိလိမ့်မည်သည့်အခါ. အဘယ်သူမျှမကပိုသတ်ဖြတ်. အဘယ်သူမျှမကပိုမျက်ရည်. အကြှနျုပျ၏စိတျနှလုံးသညျဤကြေကွဲဖွယ်များနှင့်အကြမ်းဖက်နည်းလမ်းချစ်ရသူတစ်ဦးကိုဆုံးရှုံးမူကြောင်းကိုအသီးအသီးမိသားစုမှထွက်ဝင်. သင်သည်သင်၏စကားသည်နှင့်သင်၏နှလုံးအဘို့ခရီးစဉ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်
Alasdair • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 8:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
Dillon တေလာ Salt Lake City တွင်သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်. အဘယ်သူမျှမလက်နက်. အဘယ်သူမျှမရာဇဝတ်မှု. သငျသညျကိုမသိဘဲပြိုင်ပွဲ pimp.
တေးသံ • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 8:43 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သူ Mike • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 9:35 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သူအောင်သည်အမှတ် @alasdair, သူသည်သီချင်းကပြောသည်ရုံကဲ့သို့သင်တို့ကိုချွတ်မှုတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အရာ, အဖြူရဲတပ်ဖွဲ့ရှိသည်နှင့်တရားဝင်မဟုတ်အနက်ရောင်ယောက်ျား၏ယူဆချက်အောင်လုပ်ပေးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. အဖြူဖြစ်ခြင်းနှင့်စှနျးကှကျရဲ့ငါ့မိသားစုတွေထဲကအခြမ်းနှင့်အတူနေထိုင်နေ, နှင့်အမေရိကန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအာဖရိကရဲ့အခြားဘက်ခြမ်း, အဘယ်သို့ငါခရီးစဉ်ကဆိုပါတယ်မှန်ကြောင်းကိုသင်ပြောပြနိုင်. Dillon တေလာ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, ငါဝန်ခံဖို့ရှိသည်ငါသည်ဤဖြစ်ပေါ်တူတစ်ခုခု၏ကြားဖူးတယ်အနည်းငယ်အဆတစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါဟာတူညီတဲ့အရာဖြစ်ခဲ့ကြပေမည်. ခရီးစဉ်ကပြဿနာတစ်ခုကဒီတိုင်းပြည်အတွင်းလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့်စိတ်စွန်းကွက်နှင့်အတူရှိသေးရဲ့ဖျောပွနေသည်, ထိုသို့အပြစ်တရားကြောင့်ဖွင့်. ဒါကပြဿနာပဲတလမ်းတည်းဖြင့်မသွားဘူး, ဒါပေမယ့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာဤသီချင်းအခုအချိန်မှာလက်မှာအဆိုးဝါးဆုံးပြဿနာအကြောင်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်, သူတို့တစ်တွေအသွင်မြင်လာအောင် fit ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတရားကုသနေသောငယ်ရွယ်အနက်ရောင်ယောက်ျား၏ကပ်ရောဂါအရာဖြစ်ပါသည်. သင်လိုချင်တာတွေယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကပြဿနာကိုတွေ့မြင်, ငါတို့သည်လည်းဆန့်ကျင်ရပ်တည်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်ကိုထိခိုက်သောသူတို့နှင့်အတူကိုထိခိုက်စေ.
Henock Aristide • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 9:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အပေါ်သွားရာပေါ်အလွန့်အလွန်ဝမ်းနည်းဖွယ်. nice လမ်းကြောင်း Tripp.
@TheRealChrisZ • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 9:55 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သာသညျယရှေုကိုဆောင် ခဲ့. နိုငျသောအနာရောဂါငြိမ်းစရာများနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတှကျဆုတောငျး!
ကုန်း • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 10:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါက၎င်း၏မလုံခြုံခြင်းနှင့်အန္တရာယ်အဖြူရောင်အမျိုးသမီးနှင့်မအနက်ရောင်သည်လူဖြစ်ခြင်းထင်. ငါလူမျိုးရေးခွဲခြားမရဖြစ်၏ပေမယ့်ငါ့တဘက်၌ commited သောပြစ်မှုများအများစု, ကျွန်တော့်မိသားစု, နှင့်ငါ့မိတ်ဆွေတွေကို, အနက်ရောင်ယောက်ျားအားဖြင့်ခဲ့ကြသည်. ငါကစစ်မှန်တဲ့ wasnt ဆန္ဒရှိပေမယ့်ဒါဟာဖြစ်ပါသည်.
Thebiggerpicture • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 10:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဘယ်ကြောင့်သူဖမ်းဆီးတွန်းလှန်ခဲ့သည်? သူသေဆုံးမသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်သူကဖြစ်စေအရာရှိများတွန်းလှန်ခဲ့ကြမဖြစ်သင့်. အဘယ်သူမျှမ, ပညတ်တရားကိုသင်တို့အားနာခံလျှင်သင်ပါပြီနိုင်ဘူး. အရာရှိများကွဲပြားခြားနားဘာလုပ်သင့်? လူများတို့သည်ပညတ်ကိုချိုးဖောက်ပါစို့, ဖမ်းဆီးခုခံတွန်းလှန့်သူတို့ရဲ့တစ်နေ့တာလည်? ကဘယ်အချိန်မှာအဆုံးသတ်ပါဘူး? သင်မကြာသေးမီစာရင်းဇယားမြင်ကြပြီ? သုံးကြိမ်နောက်ထပ်အဖြူ, အမည်းထက်ရဲအရာရှိ BY သေ. သုံးကြိမ်. သောနစ်ပါစို့. ငါလူမည်းပစ်မှတ်ထားလျက်ရှိသည်စဉ်းစားကြဘူး. ငါအဓိကရုဏ်းထင်, လုယက်ခြင်းနှင့်အမှုအရာကိုဆင်းကိုမီးရှို့အဖြူကလေးများလူမျိုးရေးခွဲခြားလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ် (သူတို့ရုပ်သံအပေါ်ကအားလုံးကိုမြင်နေကြသည်အပေါင်းတို့နှင့်လူမည်းကြောင်းပြုပါစဉ်းစားရန်သွားကြသည်ဘီစီ) ငါကအနက်ရောင်ကလေးများကနဲ့တူလုပျဆောငျဖို့ ok ရဲ့စဉ်းစားရန်သွားကြသည်ထင်. ရဲတစ်ဦးအကြောင်းပြချက်မပေးပါဘူး “ပရိုဖိုင်းကို။” အနက်ရောင်ရပ်ကွက်အားလုံးမြို့ကြီးများ၏အန္တရာယ်အရှိဆုံးအစိတ်အပိုင်းများကိုအောင်ရပ်တန့်. လူတိုင်း (အားလုံးအရောင်များ) သူတို့အကျင့်တရားနှင့်အထက်စဉ်းစားရပ်တန့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းနှင့်သူတို့ကကိုချိုးဖျက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်အရာကိုမျှမဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်. (သီချင်းကောင်း, သော်လည်း… သငျသညျကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်)
သူ Mike • ဒီဇင်ဘာလ 5, 2014 တွင် 9:08 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤတိုင်းပြည်တွင်နေထိုင်အာဖရိကန်နွယ်ဖွားရှိပါတယ်အဖြစ်ထက်ပိုမို 3x အဖြစ်အများအပြားကော့ကေးဆပ်ရှိပါတယ်အကောင့်သို့ယူ ကျေးဇူးပြု..
MichellH • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 10:53 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, ပြောနေတာ, ဖော်ပြခံစားချက်များကို, တံခါးဖွင့်ဆုတောင်း! မုန်းမရ…ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ကျွန်မအသက်အလယ်အဖြူအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို. ကျွန်မအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ရှုထောင့်ရှိ. ငါသည်လည်းလူငယ်တစ်ဦးအဖြူအမျိုးသမီးအဖြစ်နှောင့်ယှက်ခံခဲ့ရ (စဉ်ဆက်မပြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်) , နှင့်အခြားနည်းလမ်းတွေထဲမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုခံစားခဲ့ကြရသည်. ဥပမာအားဖြင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါအရှိဆုံးအရည်အချင်းပြည့်ခဲ့သော်လည်းအဝလွန်ဖြစ်ခြင်း၏အလုပ်အကိုင်များတက်သည်လွန်ခံရ. ဒါပေမဲ့, ငါအထင်ကြီးဖို့ရှိသည်တစ်ဦးတည်းသာဘုရားသခငျသညျကြောင့်ငါကငါ့ကိုမဆင်းရပါစေဘယ်တော့မှ, နှင့်ကျွန်မပတ်ပတ်လည်ဖြစ်ကြောင်းကိုအငယ်လေးတွေသင်ပေးဖို့ကြိုးစားဘာလဲ. ငါတို့ရှိသမျှသည်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရ, ကျွန်တော်တို့အားလုံး, တချို့လမ်းသို့မဟုတ်အခြားအတွက်. သို့သော်လည်းအဘယ်သို့ငယ်ရွယ်အနက်ရောင်ယောက်ျားရင်ဆိုင်ရသူတို့၏ဘဝပါထိခိုက်နစ်နာမှုများ, ငါအများကြီးဖြတ်ပြီးရဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်အမှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်ထင်.
Twiceborn • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 10:54 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ FB ပေါ်မှာ posted သင့်ရဲ့ tweet ကိုမြင်လျှင်မိနစ်မတိုင်မီ
“တခါတရံကျွန်မရဲ့ TL scroll & တကယ်ဆုတောင်းပဌနာရန်ရှိသည်.
ငါ unchurched အပြစ်တင်ကြဘူးဒါပေမယ့်တချို့ခရစ်ယာန်တွေကဒါမထောက်ထားသော Nonempathic #ButGod များမှာ”
ငါငြင်းခုံသို့မဟုတ်ငြင်းခုန်ချင် dont ။. ကိုယ့်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တရားမျှတမှုသည်လူအဘို့ဆုတောငျးလကျြပေါ့။. #CrazyWorld
JR • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 11:04 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, မနေ့ကငါတစ်ခုလုံးကိုအာဖရိကက Black / အမေရိကန်အသိုင်းအဝိုင်းကဆီးရီးယားနဲ့အစ်စရလဒ်ကို၏အလငျး၌ခံစားရမည်ဟုသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနာကျင်မှုနှင့်လည်းပိုကြီးတဲ့နာကျင်မှုများအတွက်ဒါစိတ်မကောင်းပါဘူး.
အဖြူရောင်ခရစ်ယာန်အဖြစ်, ငါသည်လည်းဤကဲ့သို့သောကိုယ်ကိုကိုယ်အဖြစ်လူနည်းစုများအတွက်တရားမျှတမှုခေါ်ဆိုမှု၌သင်တို့ကို join ချင်ပါတယ်. ငါစောင့်ကြည့်အဖြစ်အဲရစ်နဲ့ရော၏ဗီဒီယို months ago အသတ်ခံရတဲ့ကြောင်းလည်းပြောပါလိမ့်မယ်, ကိုယ့်သူတွေကိုမိနစ်အနည်းငယ်အဘို့, ငါသည်သူ၏ဖိနပ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနေရာချခြင်းနှင့်တရားမမျှတမှုခံစားရနိုင်.
တိုးမြှင့်ဘာသာရေးရန်လိုမုန်းတီးမှုများဒေသများရှိကြိုးစားအားထုတ်သောသူခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်, ကျနော်တို့အုပ်စုတစ်စုကိုလည်းဥပဒေမဲ့ရဲအရာရှိတစ်ပစ်မှတ်ဖြစ်လာလျှင်နားလည်ရန်ကြှနျုပျတို့အားလုံးအတှကျအရေးကြီးပါတယ်ထင်, ကျွန်တော်တစ်ဦးနှင့်ဆင်တူအခန်းကဏ္ဍအတွက်ကိုယျ့ကိုယျကိုတှေ့လိမျ့မညျ, လွန်း. ကျွန်တော်တို့ဟာတရားမျှတမှုနှိပ်ရပါမယ်ဘာကြောင့်ပဲအခြားအကြောင်းပြချက်ဘယ်ဟာဖြစ်ပါသည်.
ငါတို့ရှိသမျှသည်အဘို့အတန်းတူတရားမျှတသောကုသမှုများအတွက်ကိုနှိပ်ရပါမည် – လူ့ဂုဏ်သိက္ခာများအတွက်. ကျနော်တို့ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုလက်မခံနိုင်ရမယ်. ပထမဦးစွာနဲ့ဗွေဆော်သည့်အာဖရိကန်အမေရိကန် / က Black အသိုင်းအဝိုင်း၌အကြှနျုပျတို့၏ညီအစ်ကို, ညီအစ်မများအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်းတစ်ဖွဲ့လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းများအတွက်. ကျနော်တို့စိုးမိုးမှုတစ်ခုပွညျ၌ရှင်သန်ရပ်တည်လို့မရဘူး. ငါတို့ရှိသမျှသည်အဲရစ်နဲ့ရောရဲ့လူသတ်မှု၏အဖြစ်ဆိုးကနေအများအပြားသင်ခန်းစာများကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ပါစေ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ဘင် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 11:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤသီချင်းနှင့် ပတ်သက်. အများဆုံးကိုချစ်သောအရာကြောင့်မျှသာစကားလုံးများကိုမတစ်လမ်းအတွက်ပြဿနာခံစားရဖို့ကျွန်မကိုတွန်းအားပေးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ရိုးရိုးသားသားငါ့နှလုံး၌အပြစ်ဖြေအဖြစ်ကိုကြီးစွာသောကယ်တင်တော်မူသော၏ရွေးဖော်ထုတ်ဘို့သင့်ကိုသိပ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်.
Pamela • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 11:21 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
သင်၏စကားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ခရီးစဉ်ကို. ငါသောသူကဲ့သို့သင့်ကိုအရမ်းလေးစားမိပါတယ်, နိုင်ငံသား, နှင့်တစ်ဦးယုံကြည်သူ. သင်၏စကားသည်အစဉ်အမြဲငါ့ဝိညာဉ်တို့ထိငါ့ကိုထင်စေပြီ. ကြှနျုပျတို့အားလုံးမှပဌနာ. အချစ်များစွာ.
RyanH • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 11:35 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အဆိုပါအသွင်မြင်လာအောင်မှန်? အဆိုပါပုံစံကိုထောကျပံ့ဖို့ဘာမှမရှိဘူးခဲ့လျှင်အသွင်မြင်လာအောင်အဲဒီမှာပါလိမ့်မယ်? ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤသည်နေ့ရက်ကာလအများဆုံးရက်ပ်သီချင်းများ၏သီချင်းစာသားကိုသိရ. ငရဲကနေသူ့ရဲ့ဖြောင့်, နှင့်ငရဲနဲ့တူနထေိုငျနားထောငျကွသောသူတို့အားဖြစ်ပေါ်စေသည်. သငျသညျရဲအသတ်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်. သီချင်းနားထောင်ခြင်းကလူတစ်ဦးယဉ်ကျေးမှုကိုတွေ့မြင်လျှင်, မူးယစ်ဆေးဖောက်ကား, လူသတ်မှု, ခိုးယူ, အကြမ်းဖက်ဖြစ်ခြင်း, မလေးစားဖြစ်ခြင်း, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အကိုနားထောင်နေကြတယ်သူတို့အားပြစ်မှုကျူးလွန်ရန်ပိုမိုမြင့်မားစိတ်သဘောထားရှိသည်အံ့သောငှါနားလည်ရန်၎င်း၏လွယ်ကူပါတယ်. ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများကိုထောကျပံ့ဖို့စာရင်းအင်းသက်သေအထောက်အထားရှိပါသလား? ဟုတ်ကဲ့. လူတိုင်းခပ်သိမ်းသောမြို့၌ဤစာတရက်ပ်ယဉ်ကျေးမှုကနေအဓမ္မအပြုအမူသက်သေခံနိုင်သလား? ဟုတ်ကဲ့. လူအများစုကဒီယဉ်ကျေးမှုကိုအနက်ရောင်၌တည်ရှိ၏? ဟုတ်ကဲ့. အဆိုပါအသွင်မြင်လာအောင်များအတွက်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်…သူတို့သာအနက်ရောင် Are? အဘယ်သူမျှမ, ဒါပေမယ့်တိုင်းအသားအရေအရောင်, ဒါပေမယ့်အများစုနေထိုင်ပြီးအနက်ရောင်. ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဒီမှာပြဿနာနှင့်မတစ်ဦးကပြိုင်ပွဲပြဿနာ, ထိုသို့ဖွင့်နိုင်အောင်ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာနေသောယဉ်ကျေးမှုအဓိကအနက်ရောင်ကြောင်းဖြစ်ပျက်. သင်အမှန်တကယ်လူမဟုတ်ဟုအသွင်မြင်လာအောင်မျှော်လင့်ပါနဲ့, ဒီကိစ္စကို၏အဖြစ်မှန်ကြောင့်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေအများကြီးထဲမှာအခါ (အားလုံးမဟုတ်ခြင်းမရှိ) အဲ့ဒါမှန်တယ်? တစ်ပတ်ရှေ့တော်၌မိမိကအကောင်းဆုံးဖူးအငုံထွက်သတ်သောတူညီကောင်လေးတူသောအရာကိုမြင်တော်မူသောအာဖဂန်နစ္စတန်ရှိအဏ္ဏဝါကိုပြောပြပါ. သငျသညျကျပုံစံကိုရပ်တန့်ဖို့သူ့ကိုပြောပြ. ၎င်း၏မဟုတ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု, hip-hop နှင့်မီဒီယာမှတဆင့်လူမည်း၏ယခုဖြစ်သောလူများအပေါ်သို့ဖျက်ဆီးပျက်စီးခဲ့သူငါတို့ဘုရားသခငျ၏က၎င်း၏ရန်သူ. Saint ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့.
Thebiggerpicture • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 1:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအရမ်းဟုကိုစောင့်ရှောက်သောအရာကိုင်! စတီရီယို-အမျိုးအစားများကိုပထမဦးဆုံးဌာန၌ရှိကုန်အံ့မနေပါနဲ့. သူတို့တစ်တွေအကြောင်းပြချက်ရှိနေ!
RyanH • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 5:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကျနော်တို့ပြဿနာတစ်ခုကဒီမှာရှိကွောငျးအသိအမှတျပွုဖို့လိုအပ်. ကျနော်တို့ကဒီ hip-hop ယဉ်ကျေးမှုဝန်ခံဖို့လိုအပ် (ငါဆိုသညျကားလာသောအခါ, ရှိသမျှတို့ကိုငါညစ်နထေိုငျအကြောင်းကိုကြောင်းကိုလောကရက်ပ်ကိုဆိုလိုတာ) ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းဖျက်ဆီးလိုက်ပါတယ်. ကျနော်တို့အပြစ်တင်ကိုရပ်တန့်ဖို့လိုအပ် “လူမျိုးရေးဝါဒ” ဤအကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်အပျက်တွေများ၏အကြောင်းရင်းအဖြစ်. သမ္မာတရားကိုအနက်ရောင်အသိုင်းအဝိုင်း၏ကြီးမားသောအဘို့ဂီတအားဖြင့်အပျက်သဘောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်. ယင်း၏မသာအနက်ရောင်အသိုင်းအဝိုင်း, ၎င်း၏လောကဓာတ်လုံးကို, ဒါပေမဲ့အဲဒီအဆိုတော်များအများစုအနက်ရောင်ကြောင့်, လူမည်းသူတို့နှင့်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုအလွယ်တကူခွဲခြားသတ်မှတ်.
ခရစ်ယာန် WE ကျွန်တော်တို့ကိုလှည့်ပတ်သည်ကမ္ဘာ့သြဇာသက်ရောက်သူများရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, ဤလောက၏အဘို့အလိုငှါ. ကမ္ဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကိုအတွက်ဘုန်းတော်ကိုမြော်လကိုတွေ့မြင်ရပါမည်. ဒါကကျနော်တို့ကဘေးဥပဒ်ကိုတဦးတည်းအားဖြင့်လူတွေရဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုဤလောက၏တစ်ဦးခြားနားချက်စေမည်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
သငျသညျမှကျားကန်စစ်မှန်တဲ့ဘဝမှဦးဆောင်မယ့်လမ်းအတွက်အနက်ရောင်အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အခြားသောသြဇာသက်ရောက်များအတွက် Lee ကခရီးစဉ်. ကြှနျုပျတို့သညျသူတို့အတှကျကွောငျ့ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအိပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးဆော်ခြင်းသောကမ္ဘာကြီးအဘို့ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆုံးရှုံးဘယ်တော့မှနိုင်ပါစေ.
ကိုယ့်အခြားအဖြူမိန်းကလေး • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 11:47 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
တင့်တယ်စိတ်ခံစားမှု, လှသောအဆင်း…ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်! ဒါကြောင့်တရားကိုဟောပြောနှင့်စကားပြောရသောလွတ်လပ်ခွင့်ကိုမှတ်မိခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော, သင့်ရဲ့စည်းချက်ကိုချစ်, အားလုံးကိုချစ် 116 ဂီတကိုကလစ်နှိပ်ပါ, ya'll များအတွက်နာကျင်မှုခံစားရ, ဟုတ်တယ်ငါပြုမည်. သင်တို့ကဲ့သို့ဘယ်တော့မှအတွေ့အကြုံရှိဘဝ, yeah ဆင်းရဲမွဲတေမှုဖြစ်ခြင်း, ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည်အကယ်စင်စစ်အဖြစ်ကိုညှဉျးဆဲ, သူဌေးကျောင်းတွင်အကယ်စင်စစ်အတွက် segregated, တပ်ပြီးသေနတ်အကယ်စင်စစ်နှင့်အတူလုယက်ဎအနေနဲ့အားလုံးအနက်ရောင်ရပ်ကွက်အတွင်းတစ်ဦးအဖြူအဖြစ်တိုက်ခိုက်ခဲ့, အကယ်စင်စစ်လူမည်းများကမြို့ဘတ်စ်ကားပေါ်တိုက်ခိုက်ခဲ့, ဒီကျူးကျော်အကယ်စင်စစ်ကနေအတှေ့အကွုံ PTSD, အရက်ကိုငါ့ကလေးဘဝကိုယူ, အလွဲသုံးစားမှု, ငါ့မိဘများနဲ့ငါ့အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းနှင့် smokin ပေါင်းပင်ကိုယူကျွန်တော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးကိုအချိန်အကယ်စင်စစ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ငါ့အမေ-ခေါ်ဆိုမှုကိုခုခံကာကှယျ 911! နှာခေါင်းကိုဖဲ့ moms, အဖေဟာနင်စေပေါ်တွင်တင်, STOP အော်ဟစ်ငါးနှစ်အဟောင်းမိန်းကလေး! တစ်လျှောက်လုံးအသှေးကို, မြေပြင်ပေါ်တွင်နတ်ဆိုး, ယခုတွင်ငါသည်ကြီးမားတဲ့မိန်းကလေးပေါ့. ငါ့ကိုဆွဲထုတ်, ဟုတ်ပါတယ်သူလုပ်ခဲ့တယ်! အဆိုပါနှားခြေးမွငျးခြေးနှင့်ရွံ့ခြင်းမှ! လိင်ကနေ, မူးယစ်ဆေးဝါးများ, သေဆုံးခြင်း, လှည့်ဖြားခြင်း, မအောင်မြင်ခြင်း, သူသည်ငါ့ကိုကယ်တင်, ပိုကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုများအတွက်. ငါတို့ရှိသမျှသည်နာကျင်မှုခံစားရ, ရဲ့တဦးတည်း Thang ဘို့စစ်တိုက်ကြကုန်အံ့! ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်ဦးသက်သေခံချက်များ, က rascism sarcasm sexism င်ရှိမရှိ(crae),အရကျစှဲခွငျး, စှဲမွဲမှု, ဒုက္ခ, စိတ်ထိခိုက်တဲ့ဝိရောဓိ, ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အားအတွက်အမှန်တရားနှင့်အချစ်အစ်ကိုခြင်းတရားကိုဟောပြော! ကျနော်တို့ဘာလုပ်နိုင်? သငျသညျအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုပြုပါ! ငါ့ကိုသငျသညျကိုခစျြခစျြ! နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းများ, ခရစ်ယာန်များအထ! အဆိုပါသခင်ဘုရား၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာချစ်ခြင်းမေတ္တာ Love!
Onyi • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 11:50 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဘီလ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 12:08 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်အစ်ကို, ငါစုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်အကြာ Cedarville မှာသငျသညျတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, အမြဲတမ်းသင့်ရဲ့ဂီတကိုချစ်ပြီးရာထူးတိုးပါပြီ. တရားကိုဟောပေါ်တွင်သင်၏ဆွေးနွေးချက်ကြီး! သို့သော်လည်းငါသည်သင်အကြွေစေ့၏အခြားဘက်ခြမ်းကိုစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်. သငျသညျ '' ဒါဟာ coulda သင်ခဲ့ '' ဟုပြောသည့်အခါ…သင်ကငါ့ကိုပါပြီနိုင်ကြောင်းတူညီသောလမ်းအတွက်နားလည်ရန်လိုအပ်, ငါဟောင်းလူဖြူတရားဟောဆရာတယ်. မြို့ကြီးများတွင်သို့မဟုတ်ကျေးလက်မြို့ရွာ၏လမ်းများချ Walking, ငါတို့ရှိသမျှသည်လိုမုန်းထားနှင့်မုန်းတီးမှု၏သားကောင်များဖြစ်နိုင်ပါတယ်…ရိုးရှင်းစွာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားအရေရဲ့အရောင်၏…ကိစ္စကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတ်ကောင်ဒါမှမဟုတ်ဘာကျနော်တို့အချိန်လုပ်နေကြခြင်းမရှိ. ဒါဟာကျဆုံးခြင်းနှင့်အပြစ်တရား၏မှောင်မိုက်အဖြစ်မှန်င်.
သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်….ဒါကြောင့် '' အလိုမရှိ’ သငျသညျ '' လမ်းမများပေါ်တွင်ဦးကိုဖမ်းဆီးသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ရပြီ, သငျသညျခရစ်ယာန်တစ်ဦးအဖြစ်အရာရှိချုပ်မှတုန့်ပြန်ခဲ့ကြလို့, နှင့်ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူကြောင်းကိုအာဏာပိုင်များလေးစားသောနှင့်နာခံသူတစ်ဦးသည်လူအဖြစ်, တမန်တော်ပေါလုကဲ့သို့. သင်တို့သည်ဤလူတို့သညျအသီးအသီး၏အခွအေနဆန်းစစ်လျှင်သင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့, သူတို့ခုခံတွန်းလှန်ဖို့ရှေးခယျြမှုလုပ်သောသိသာသည်, နားမထောင်, သူတို့သစ္စာရှိရှိလုပ်နေတာတွေနဲ့တရားစွဲဆိုဖြစ်ကြောင်းသူတို့အလုပ်သူတို့လုပ်နေကြသူ Leo စစ်တိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်တိုက်ခိုက်ရန်. ထိုအခါအရာရှိဘက်လိုက်မှု၏အပြစ်ရှိကြောင်းခဲ့ကြပေမည်နေစဉ်, စိတ်စွန်းကွက်သို့မဟုတ်မုန်းတီးမှု, သားကောင်ပညတ္တိကျမ်းနှင့်အတူပူးပေါင်းခဲ့လျှင်, သူတို့အသက်ရှင်သေးနှင့်တရားရုံးတွင်သူတို့တဘက်၌မဆိုတရားမမျှတမှုကိုလိုက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်. ကြှနျုပျတို့အားလုံးမတရားမှုကိုမှဘာသာရပ်များမှာ….ငါတို့သည်တုံ့ပြန်ပုံကို….မကြာခဏရလဒ်ကိုဆုံးဖြတ်သည်….ဤကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်များတွင်အသီးအသီးအတွက်ပြုသကဲ့သို့.
ဒီစဉ်းစားပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်, ငါမှားရှိပါကငါ့ကိုပြင်ပေးဖို့အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး, သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏အကြံဉာဏ်ကိုသခင်ယေရှု၏သွန်သင်ရန်ကျမ်းစာနှင့်မညီသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်လျှင်. ဘုရားသခငျသညျသငျသညျငါ့အစ်ကိုကိုကောင်းကြီးပေး, နှင့်ရဲ့အနာရောဂါငြိမ်းစရာဘို့အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြကုန်အံ့….ခွဲဝေမပေး.
Stephanie • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 1:30 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘဝကဒါအဖိုးတန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းရှိလူများ၏ဘဝသည်အခြားတိုင်းရင်းသားများကဲ့သို့တူညီသောကိစ်စတှငျကငျြးပခဲ့သည်မဟုတ်ဘယ်လိုကြည့်ဖို့ငါ့ကိုဝမျးနညျး. အဘယ်သူမျှမသေခြင်းသို့ဆင်း gunned သို့မဟုတ်ဆို့ခံရဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်. ကြွင်းသောအရာအပြုအမူ၏ဤအမျိုးအစားကိုသင်ဝမ်းနည်းစွာမှားများမှာဘုရားသခင်ကသတိမမူကြလိမ့်မည်ထင်သောသူတို့အားအာမခံ. လူကိုသူအမွငျ့ဆုံးသောမှဖြေဆိုရန်ရှိသည်တံ့သောအရာကိုလက်ျာသည်များအတွက်မခံမရပ်လျှင်. ခရီးစဉ် Lee က….သင့်ရဲ့နာကျင်မှု / ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာကျင်မှုတစ်ဦးသံသယမရှိဘဲအစစ်အမှန်ဖြစ်ပါသည်. ထိုအခါထာဝရအရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုနားမထောင်ခြင်းနှင့်အညီတုံ့ပြန်မည်. ကျနော်တို့ရုံကိုယ်တော်၌မြဲမြံစွာရပ်နေရန်ရှိသည်, သူကပြောပါတယ်ဘာလုပ်ဖို့နားထောခံရ. ငါကလူအဖြစ်ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာကိုယရှေုကိုအမည်၌စည်းဝေးကြလိမ့်မည်ဟုဆုတောင်း, အပြုသဘောပြောင်းလဲမှုအတွက်ပါဝါတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိ.
ယာကုပ်အမျိုးကို • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 2:01 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသင်တို့အားရှေ့ဦးစွာစကားကိုနားထောင်ပါတယ်ကတည်းကငျသညျငါ့ကိုရန်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်. ထိုအခါငါယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့သီချင်းတွေကိုကိုချစ်စဉ်, ဒီတစ်ခုဘာမှထက်ငါ့ကိုပိုပြီးဝမ်းနည်းလုပ်, မဟုတျဘဲလို့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ပြီသေမင်း၏ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးများ. ဒါဟာရုပ်သံကိုဖွင့်ပါသို့မဟုတ်သတင်းကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤကမ်ဘာပျေါတှငျမှားယှငျးလုပျနိုငျသမြှကိုကြည့်ဖို့မယုံနိုင်စရာဖွင့်. ငါဖယ်မီဒီယာငါ့ကိုပြောထားသည်သောအရာကိုအနေဖြင့်သူတို့အားအထူးသဖော်ပြခဲ့တဲ့ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိရပါဘူး, ငါတစျဦးစီအပေါ်အချို့သောထင်မြင်ယူဆကြလို့ပြောရပါမည်သော်လည်း. အဘယျသို့အကြှနျုပျကိုဆုံးနာကျင်ဖြစ်ပါသည်အဘယ်သူမျှမကအမှန်တရားကိုရှာကြံနှင့်တရားမျှတမှုထူထောင်ထံမှစိတ်ရင်း၏လှုပ်ရှားမှုကိုသတိပွုမိသောအချက်ကိုဖြစ်ပါသည်, ဖွင့်နှင့်အခြားသူများ alienating မှ, ပိုပြီးတိတိကျကျခွငျးခံရသညျ့လူများနှင့်ရဲများကအဖြူ. ငါကမြင်လမ်း, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုမြှင့်တင်တစ်ခုတည်းသောအရာပထမဦးဆုံးအကသူတို့မျိုးနွယ်နှင့်၎င်းတို့၏ပြစ်မှုပေးခြင်းတစ်ဦး platform ပေါ်တွင်မတ်တပ်ရပ်သောသူဖြစ်ကြ၏. အစဦးတွင်, ငါမကြာသေးမီကအနက်ရောင်ခွငျးခံရသညျ့လူမြိုး၏လက်ဖြင့်အဖြူခွငျးခံရသညျ့လူမြိုး၏မကြာသေးမီကရာအရပ်ကိုယူကြပြီကြောင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သောလူသတ်မှုနှင့် ပတ်သက်. ကိုဖတ်ပါတယ်ပုံပြင်များမှလင့်များတစည်း post သွားခဲ့သည်, ငါကအနက်ရောင်ခွငျးခံရသညျ့ကလူရွားလှသို့မဟုတ်အဖြူခွငျးခံရသညျ့ကလူထက်လျော့နည်းဖြစ်ကြောင်းပြောလိုချင်မရသောကြောင့်,, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာလူတိုင်းခံစားနေရပြီးအပေါင်းတို့နှင့်သားကောင်များဖြစ်ကြကြောင်းပြော. သငျသညျရဲများကနှင့်အတူအသေအချာမသိပြေး ins အကြောင်းကိုဘယ်နှစ်ယောက်အဖြူခွငျးခံရသညျ့ကလူကိုမေးမြန်းခဲ့ကြ? ငါသူတို့ခဲ့ပြီးပြီသင်အာမခံ, ရဲများကအမှားတွေလုပ်. im ဒီမှာဘက်ယူဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်, ကြှနျတေျာ့အမှတ်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုစောင့်ရှောက်တစ်ခုတည်းသောသူတွေကိုအသက်ရှင်လျက်ပါမယ်အခြားမျိုးနွယ်၏သူတွေကိုဆန့်ကျင်မုန်းတီးရာမှထွက်ပြုမူသောသူတို့အားမဖြစ်ကြကြောင်း, အဲဒါကို Self-လှုံ့ဆော်မှုအမုန်းတဦးလုပ်ရပ်ရဲ့, တရားမျှတမှုကိုသခင်ဘုရားကိုပိုငျဆိုငျ. သို့သော်တစ်ဖွဲ့လုံးအသိုင်းအဝိုင်းသို့မဟုတ်အုပ်စုတစ်စုဟာသူတို့ရဲ့အရေခွံကိုအခြားသူများမှသူတို့ကိုမဆိုကွဲပြားခြားနားသောယုံကြည်အားဆက်လက်သည့်အခါ. သူတို့ရဲ့အရေခွံယုံကြည်သူများသည်သူတို့ကိုအခြားသူတွေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကိုလုပျဆောငျသို့မဟုတ်ပြုမူဖို့ခွင့်ပြုသို့မဟုတ်သူတို့ကိုစေတနာစိတ်ပျက်ခံရဖို့အထူးခွင့်ပြုချက်ပေးသည်. အဆိုပါပြိုင်ပွဲဟာရာဇဝတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသားအရေကျနော်တို့နေသောမဟုတ်ပါဘူး, ကျနော်တို့အာဖရိကသို့မဟုတ်မက္ကစီကိုတွင်ကြီးပြင်းခြင်းရှိမရှိ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသားအရေအရောင်ခြယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်အမွေမဟုတ်ပါ. ကျွန်မခရီးစဉ် Lee ကအဖြစ်ကိုသင်အနက်ရောင်လူကိုသိရန်မလိုချင်ကြဘူး, ငါကအနက်ရောင်ယောက်ျားသည်ယာကုပ်အမျိုးကိုအဖြစ်လူသိများခံရဖို့မလိုချင်ကြဘူး, သို့မဟုတ်ယာကုပ်သည်လူဖြူ. ငါသည်ယာကုပ်ပေါ့, သငျသညျခရီးစဉ်ပါပဲ. ကျနော်တို့ကပင်ရှိရဲ့အသိအမှတျပွုခွငျးဖွငျ့ဤကြီးထွားလာသွေးခွဲသာတိုး. သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှသွေးခွဲရှိ. ပေါင်းသည်ညီအစ်ကိုချင်း. အားလုံးညီအစ်မတွေ. သခင်ဘုရား၏အားလုံးသားသမီးများကို. ငါသည်သင်တို့ကိုလူကိုနာကျင်နေစိတ်မကောင်းပါဘူး, သင်သည်ငါ၏အသက်တာ၌မှုတ်သွင်းတော့အားလုံးအတှကျကြေးဇူးတငျစကား!
Burton • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:13 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဘယ်အရာကိုမျှပေမယ့်အမှန်တရားအစ်ကို, ငါအဖြူရယ်သော်လည်း, ငါ ya'll နှင့်အတူအခေါင်းသို့ရချင်, သငျသညျစိတ်မနာစေတဲ့အခါမှာစိတျနာခံရ. ငါအချိန်ကြာမြင့်စွာသငျသညျအောကျပါခဲ့တာနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပုံစံလုပ်ရန်ကျွန်မအကြိုက်ဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်! သင်တို့သည်သခင်ဘုရားခရီးစဉ်မှတဆင့်ငါတို့အဘို့အလုပ်နေလုပ်နေအဘယျသို့ခစျြ, ဆက်လက်ပြီးရှိသည်.
Dayo • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:25 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Coulda ဘယ်သူ့ကိုမှခဲ့… ထခရီးစဉ် Lee က * လက်မ *
Shelby • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဟေးခရီးစဉ်, သင်၏နှလုံးမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်စကား. ငါလူငယ်တစ်ဦးအနက်ရောင်လူကိုငါမနေစဉ်, ငါသညျအမှနျတကယျအစဉ်အဆက်နားလည်မပြုစေခြင်းငှါ, ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူစိတ်ထိခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေပါ၏. မကောင်းတဲ့ရဲအရာရှိများနှင့်ခက်ခဲသည့်အဘို့ဖြစ်စေခြင်းငှါသောအချက်တက်ဆောင်ခဲ့မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 90% ကောင်းသောအရာရှိများနှင့်ကျနော်တို့ဘုရားသခငျ၏တပုံရိပ်အားလုံးကိုတူညီတဲ့တန်ဖိုးရှိများမှာကြောင်းကိုသင်၏မှတ်ကိုချစ်ပြီးငါတို့မြော်လင့်ဖြစ်သင့်ဘယ်မှာရဲ့များ၏. ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီကညီအစ်ကို.
TBrant • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:38 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသီချင်းစာသားသည်လူပေါ်တွင်သင်ခံစားမိ. ငါသည်ဤအတိတ်တွင်သင်သည်မှဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်စိတ်မကောင်းပါဘူးငါသည်ဤအဓမ္မအမှုနှင့်ညှဉ်းဆဲကြပြီသောသူအပေါင်းတို့နှင့်ဝသကဲ့သို့သင်နှင့်အတူနာကျင်နေပါတယ်. အခြားသူများနှင့် Living မေတ္တာနှင့်လမ်းလျှောက်, သူတို့နှင့်အတူကိုထိခိုက်သူတို့နှင့်အတူငိုကြွေးအဓိပ္ပာယ်, ကျနော်တို့ဆငျးရဲဒုက်ခအတွက်သူတို့နှင့်အတူလုပ်ဖို့ဟုခေါ်ကြသည်ကားအဘယ်သို့. ကျွန်မလက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင့်တွင်အမှုအရာနှင့်အတူရုန်းကန်နေပါတယ်ဒါပေမယ့်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာဆုတောင်းခြင်းဖြင့်သင်နှင့်ဤသည်၌ပါဝင်ပတ်သက်လူတွေကိုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်သကဲ့သို့ငါပြုသောပဌနာကိုတောင်း. သငျသညျ BRO Love. သငျသညျတွေ့ဆုံရန်ရှိသော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုချစ်ဘယ်တော့မှနိုင်ပါစေ.
အင်ဒရူး • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါသည်ဤ #couldabeenme နားမလည်ဘူး. ငါသည်သင်တို့ကိုယခုမူကားဖာဂူဆန်အတွက်ဖြစ်ပျက်အကြောင်းထုတ်ပြောပြီအခြားခရစ်ယာန်အဆိုတော်များမဟုတ်ရုံမှအတော်လေးအချိန်အတန်ကြာတဲ့ပန်ကာပါပြီခရီးစဉ်, သို့သော်ကျွန်မဖာဂူဆန်ကျော်အော်ဟစ်နှင့်အတူမကြာသေးမီကစိတ်ပျက်ဖြစ်လာကြပါပြီ.
ကျွန်မတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုရှေ့ပြေးဖြစ်မယ့်ငါ 25 နှစ်အရွယ်အဖြူရောင်အထီး. ငါကစည်းလုံးပြည်နယ်များရှိလူနည်းစုဖြစ်တူကဘာလဲဆိုတာနားမလည်ကြဘူး. အစဉ်အမြဲငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အပြေးပြိုင်ပွဲများ၏ကျော်ဆွဲထုတ်ခဲ့ကြတူသောငါမခံစားရဘူး. ငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အပြေးပြိုင်ပွဲကျ patted ခဲ့ဖူးဘူး. ငါရှိသောကြောင့်ငါ၏အပြေးပြိုင်ပွဲ၏နောက်ကျောကျင်းပခဲ့ဖူးဘူး. ဤရွေ့ကားငါနားလည်လို့ပြောမရှိမဖြစ်သောအရာများမှာ.
ကျနော်တို့အမှုအရာနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောနေကြသည်နေချိန်မှာကျွန်မနားလည်အတွက်မရှိမဖြစ်အဆိုပါ #couldabeenme tag ကိုအကြောင်းပြောဆိုပေးနိုင်ပါတယ်. အမှန်တကယ်?!? ဒါဟာသင်ပါပြီနိုင်?!? သင်တစ်ဦးအဆင်ပြေစတိုးကနေဆေးပြင်းလိပ်ခိုးယူပြီးတော့တစ်ဦးရဲမှနားမထောင်မယ်လို့? သငျသညျဖမ်းဆီးခုခံတွန်းလှန်မယ်လို့? သငျသညျ hit သို့မဟုတ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယူနီဖောင်းအရာရှိတစ်ဦးထိခိုက်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်?!?
ငါကငါနိုင်ငံရပ်ခြားတွင်နေထိုင်ခဲ့ကြ US မှာလူနည်းစုဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်၏အရာကိုသိဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုနားလည်နေချိန်မှာသင်မြင်. ငါအဘို့အဥရောပတှငျနထေိုငျ 8 အနှစ်. ဥရောပတိုက်တွင်အချိန်ဖြုန်းနေချိန်မှာကျွန်မနိုင်ငံတိုင်းတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုရှိကြောင်းထုတ်တွေ့ရှိရ. ကျနော်တို့ကိုသူတို့ကဗြိတိန်အနေဖြင့်ခဲ့ကြသည်ဥရောပတစ်အနက်ရောင်လူတစ်ဦးနှင့်တွေ့ဆုံရန်အခါတိုင်းငါ့မိသားစုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့တွေ့ရသောအရာတစျခုဖွစျသညျ. သူတို့ထဲကလူတိုင်းလျော်သောအင်္ဂလိပ်စကားပြောနှင့်အလွန်ယဉ်ကျေးများနှင့်ကောင်းစွာဆစ်ခဲ့ကြ. သူတို့ထဲကတယောက်မျှမိမိဒူးတို့ကိုလှည့်ပတ်သူတို့ရဲ့ဘောင်းဘီဝတ်ဆင်.
သင်သည်သူတို့လူငယ်လူရမ်းကားများကဲ့သို့ပြုမူရန်အဘို့အကလက်မခံနိုင်ခဲ့ဘယ်မှာရှိတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့မြင်. ဤတွင်အမေရိကန်ကပုံမှန်ရှိရာယဉ်ကျေးမှု၏အိတ်ကပ်ရှိပါတယ်, ပင်လူရမ်းကားများကဲ့သို့ပြုမူဖို့ချီးမြှောက်ခြင်း. အဘယ်ကြောင့်ဒီအမှုဖြစ်ပါသည်???
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဖာဂူဆန်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကြပါဘူး?? ကောင်းပြီလူတိုင်းကောင်းတစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်ကိုဤမိုက်ကယ်ဘရောင်းသည်ဆိတ်သငယ်ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်. ငါသူကောလိပ်ကျောင်းသွားဆိုလို! ကောင်းပြီသည့်အခါအကောင်းတစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်ဖြစ်ခြင်းတန်းတူကောလိပ်သွားကတည်းက? သူကောင်းတစ်ဦးသည်ဆိတ်သငယ်မဟုတ်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်မှန်များကိုကြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်. သူသည်သူခိုးနှင့်ဒုက္ခထုတ်လုပ်သူခဲ့သည်. အဆုံး၌သူအခွင့်အာဏာမှနားမထောင်ခဲ့ကြနှင့်ဤနောက်ဆုံးမှာသူသေဆုံးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ.
အဘယ်သို့ငါခရီးစဉ်နားမလည်ဘူးအဘို့ဤဖြစ်ပျက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်, ရန်အဘို့အ “couldabeenme” သင်သည်လည်းဤအရာများကိုလုပ်ဖို့ခဲ့ကြလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးတိုးကနေခိုးယူခဲ့ပြီးတော့နောက်မှသင်ရပ်တန့်သောရဲတိုက်သော်လည်းအလို.
အဆုံးမှာ, အဘယ်အရာကိုဖြစ်ပျက်ဝမ်းနည်းဖွယ်ဖြစ်ပါသည်! သို့သော်သင်ပါပြီနိုင်ဘူး. ဒါဟာငါ့ကိုပါပြီနိုင်ဘူး. ငါဖြစ်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမဖြစ် 25 နှစ်အရွယ်အထီး. ငါခိုးယူမဟုတ်ဘူးငါရဲမတိုက်မယ်လို့ကြောင့်ထိုသို့ပြု. သူများသည်ဒီမှာကိစ္စများဖြစ်ကြသည်. မပေးပြိုင်ပွဲ.
Kori • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:46 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
မိုက်ကယ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:48 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကြေးဇူး, ငြိမ်းချမ်းရေး, ငါတို့ဘုရား Daddy ကနေမေတ္တာနှင့်ကရုဏာ
ပဌမ, ငါသည်သင်တို့၏ကယျတငျတျောမူခွငျးနှင့်ကျွန်သည်ပါးပျဉ်းအစ်ကိုများအတွက်သခင်ဘုရားကိုချီးမွမ်းချင်ပါတယ်. သငျသညျခမညျးတျောကိုကောင်းစွာကိုယ်စားပြု. ငါသည်သင်တို့ကိုဘုရားသခငျသညျသိသိသာသာအစောပိုင်းငါ၏ကယ်တင်ခြင်းတရား၌ငါ့လမ်းလျှောက် impact ဖို့အသုံးပြုကြောင်းပထမဦးဆုံးအနုပညာရှင်ပါပဲဟုမင်္ဂလာပေါ့. ဒီဇင်ဘာလ၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လေ 2006 ငါဒါနက်ရှိုင်းစွာကပဲခေတ်ပြိုင်ကိုးကွယ်ခြင်းနားထောင်ခြင်းပြောင်းလဲရန်ခဲယဉ်းသော Hip-Hop / မြို့ပြယဉ်ကျေးမှုထဲမှာ embedded ခဲ့သည်, “ငါဂီတ Love”. ဒါကြောင့်သမ္မာကျမ်းစာကိုးကွယ်ခြင်းမှုနှငျ့ဆကကွဲပြားခြားနားသည်ကိုမည်သို့အဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအသိအမြင်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးနှင့်အကွံဉာဏျလေးမွတျ.
သင်းအုပ်ဆရာဘီလ်, ကျေးဇူးတော်နှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်အဖြစ်ကောင်းစွာ…ငါတွန်းလှန်ဖမ်းဆီးနှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝသဘောတူသော်လည်းကျွန်မပြင်းပြင်းထန်ထန်မလျော်ကန်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ / လုပ်ရပ်တွေကိုအဘို့အထောကျခံခဲ့ခြင်းနှင့်ပြဌာန်းသင့်ကြောင်းစံချိန်စံညွှန်းများရှိပါသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်.
မိုက်ကယ် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 4:50 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Zander • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 6:10 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါ့ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါသည်ဤသီချင်းနှင့်အတူသဘောမတူဘူး. ဒါဟာ America မှာအမှန်တကယ်သောလူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကိုပြသ. လူတိုင်းကိုသူတို့အဲဒီမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ရုံကြောင့်လူဖြူလူမျိုးကြီးဝါဒဖြစ်ကြောင်းညည်းညူ. ကဆိပစ်သတ်သူတစ်ဦးအနက်ရောင်သည်လူကြီးဘူးဆိုရင် (အရာရှိသေနတ်ဘို့ရောက်ရှိခဲ့ဘယ်သူကို) သူ့ကိုပစ်သတ်ဘယ်အရာကိုမျှမယ်လို့သမျှဆိုပါတယ်ခဲ့. ရုံကျနော့်အမြင်နှင့်အမုန်းအပေါ်ဆောင်ကြဉ်း :)
ဂျေဆန် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 6:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး bro ရှိသည်ဖို့သင့်ရဲ့စိတ်အားထက်သန်တန်ဖိုးထား. ကျနော်တို့နှစ်ဖက်ပေါ်မှာရှိသမျှနှင့်အတူအသေခံရန်လိုအပ်ပါတယ်သောတိုင်းပြည်အတွင်းကိစ္စများရှိသည်နှင့်ကြောင်းလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်!
ကျနော်တို့လူတိုင်းခရစ်တော်၏မေတ္တာတော်ကိုပြသနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် – ဒါကြောင့်ကျွန်မချစ်ခြင်းအကြောင်းအနည်းငယ်အပြုသဘောဗီဒီယိုကိုအတူတူထား… https://m.youtube.com/watch?v=7oPOZppRZRk
Whitney • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 6:26 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤသူသည်ငါခံစားမိအတိအကျဘယ်လိုဖြစ်ပါသည်! ဒါကလှပစင်ကြယ်သောစကားရပ်ဖြစ်ပါသည်. အတူဆုတောငျးလကျြနှငျ့သငျ BRO များအတွက်! ငါသည်သင်တို့ကိုချစ်နှင့်သင့်ဓမ်မအမှုရှိသမျှတို့ကိုတန်ဖိုးထား.
ဘင် • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 7:15 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ရုံသင်တို့သည်ငါအဘို့အနာကျင်နေပါတယ်နှင့်ဖြေရှင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ထမ်းခံစားရသိစေခငျြတ. ငါအများအားဖြင့်အဖြူရောင်လေးတွေနဲ့ဆင်ခြေဖုံးဘုရားကျောင်းမှာလူငယ်ဒါရိုက်တာဖြစ်ကြောင်းကို, အဲဒီမှာနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ထိခိုက်စေအဘယ်ကြောင့်သူတို့ကိုနားလည်ကူညီပေးနေဘုရားစကားလုံးသို့ပြီးခဲ့သည့်ညဥ့်ရေငုပ်သူတို့နှငျ့အတူအကြှနျုပျ၏ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဥ့်လေ့လာမှုသုံးစွဲ, ဘယ်လိုယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကိုဖုံးလွှမ်းနဲ့ခရစ်တော်ထွန်းလင်း၏အလင်းကြကုန်အံ့ဟုဆိုကြ, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ရာ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်အတူငိုကြွေးရာ၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်အတူငိုကြွေးနေကြသည်. ထိုအခါသင်နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ရသောယုံကြည်ခြင်းသည် RX လို့ခေါ်တဲ့ဖြစ်ရပ် @ ယနေ့ညသုံးစွဲ, လူကြီးများမှထိုသတင်းစကားကိုပေးခြင်း. ငါသည်အနာပျောက်စေသောဖို့လမ်းအားလုံးပါဝင်ပတ်သက်များအတွက်ရှည်လျားသည်ကိုသိနှင့်ကျွန်တော်ဘုရင်ပေါ်မှာငါတို့မျက်စိအာရုံစူးစိုက်လာသောအခါမှသာစစ်မှန်သောလုပ်မည်ဖြစ်ပြီးခရစ်တော်နှင့်တူနထေိုငျ. ငါနှစ်ဖက်စလုံးတွင်နာကျင်မှုများအတွက်ဒါစိတ်မကောင်းပါဘူးငါပါပြီသိလိုခြင်းနှင့်မျက်စိကန်းသောမျက်စိနှင့်အတူသူတွေထဲမှာနှလုံးပြောင်းလဲမှုဘို့ဆုတောင်းကြလော့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်. မင်းခေါင်းကိုမော့ထား, ဘုရားသခငျသညျသစ်စာနဲ့ကောင်းလှ၏, သငျတို့သညျဘုရားသခငျနှငျ့သငျသညျကောင်းကြီးမင်္ဂလာခဲ့ပါသည်ဘာလုပ်ဆက်လက်, သင်တစ်ဦးခြားနားချက်လုပ်နေပါတယ်.
Osakpolo • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 7:43 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဒီအတွေးငါ့စိတ်ကိုတဆင့်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီသီခငျြးကိုအဘို့အသင်တို့သည်ဤမျှအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါသည်. တစ်ဦးအဖြစ် 21 ဘော်စတွန်အတွက်နှစ်အရွယ်လူမည်းအထီးငါသည်သင်တို့နှင့်တူခရစ်ယာန်ဘာသာယောက်ျားမှတက်ကြည့်ရှုနိုင်မလေးမြတ်.
Angelique • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 7:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ကြှနျတေျာ့တဦးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ရနိုင်ပါသလား4အမြိုးသားတို့! သငျသညျခရီးစဉ်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ငါကလူတစ်ဦးအငြင်းအခုံအနိုင်ရဖို့ကြိုးစားနေရပ်တန့်နှင့်အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောက်ျား၏စိတ်နှလုံးစကားကိုနားထောင်မည်အကြောင်းဆုတောင်းကြလော့.
GageGuest • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 8:24 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
teip lee ငါ့နှလုံးအသေသတ်ခြင်းကို chocked လူကိုတာ၏နောက်ဆုံးသောဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီးနောက်လည်းဝမျးနညျး.
ငါအားမတရားသငျသညျထစကားပြောအပေါ်ယောက်ျားတွေစစ်ကြောစီရင်. ကျွန်မဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်များအချင်းချင်းချစ်ရမယ့်ပညတ်အစားရှုမြင်ထဲကကြည့်ရှု. ငါအားမတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြပါပြီယေရှု၌ညီအစျကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး.
ငါမစုံလငျဖြစ်ကြောင်းကိုငါဘုရားနေ့စဉ်ကိုချစ်လိုအပျကွောငျးကိုသိ. သူကကျွန်မကိုမှယဉ်ခဲ့. သူဟာကြောက်မက်ဘွယ်သောစိုးရိမ်စိတ်တိုက်ခိုက်ရာမှယနေ့ငါ့အသက်ကိုနှမြော. ငါသေဆုံးမယ့်ခဲ့သည်ထင်ပေမယ့်သူကခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး.
ငါငါ့အလိုရှိသမျှဆိုရှယ်မီဒီယာကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုခွဲထုတ်မယ် (သူတို့ကို delete) ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်လာစေရန်နှင့်ဝိညာဉ်တော်၌နှင့်အမှန်တရားယေရှုနဲ့အတူလမ်းလျှောက်ဖို့!
Mauricio Arriaga • ဒီဇင်ဘာလ 4, 2014 တွင် 10:45 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
သငျသညျအကြှနျုပျအဘို့ဆုတောငျးနိုငျငါတကယ်ကတန်ဖိုးထားလိမ့်မယ်ငါသူ့ကိုအလုံအလောက်မရှိကြပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရယ်ဘုရား၏ကပိုလိုအပ်ပါတယ် Iike ခံစားရ BRO 13 ကာမန်ကယ်လီဖိုးနီးယားနှင့်သင်ယောက်ျားတွေထဲကနေနှစ်အရွယ်ကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုငါ့စံပြဖြစ်ကြောင်းကျွန်မခရစ်ယာန်တစ်ဦးပေါ့ငါမူကားအပြစ်တရားနဲ့ပြန်မယ့်အပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါအပြစ်ဖြေရာသို့အပြေးငြီးငွေ့တယ်ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုကိုပြောင်းလဲချင်ငါအသစ်တခုဖန်တီးဖြစ်ချင်တယ်သင်သည်တတ်နိုင် ဘုရားအကြှနျုပျအပျေါအလုပ်မလုပ်ပါဘူးဆုတောင်းဒါနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဖြစ်နိုင်ပါတယ် <3 it coulda been me who got shot we never know when we gonna die we never know when god is gonna call our name and say its time for you to go that's why we should always be ready we need to say every night and every time you go out god if I don't want up or I don't come back home pleaz accept me into your throne of glory and eternal life <3
Denzel Patrick NY Jr. • ဒီဇင်ဘာလ 5, 2014 တွင် 12:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
NicholasTracy • ဒီဇင်ဘာလ 5, 2014 တွင် 1:30 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
အစဦးတွင်, ဒီပို့စ်များကိုမြင်သောအခါ, ငါကမရခဲ့ဘူး. ငါတော်တော်များများကိုယ့်ကြောင့်နှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့သည်ထင်, ငါယခုကြောင့်လည်းမာနထောင်လွှားဘူး. ဤသီချင်းနှင့် Derek မိုင်းနားရဲ့မကြာသေးခင်ကလွှတ်ပေးရေးကိုနားထောင်ပြီးနောက်, ငါကျေးဇူးတရားဒီကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာသတိပေးခဲ့သည်, ငါအရှိဆုံးပျောက်ဆုံးခဲ့သည်အစိတ်အပိုင်း. ငါကွဲပြားခြားနားသောအမြင်များကနေစဉ်းစားရန်အချိန်ကိုမယူခဲ့ပါ. တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ခြင်းတစ်ဦးလူလတ်တန်းစားအဖြူရောင်ကောင်လေးအဖြစ်, ကျနော်တို့အခြားသူများကွဲပြားခြားနားကြည့်ရှုဖြစ်ကြောင်းခက်ခဲတဲ့အချိန်နားလည်မှုရှိခဲ့, မင်းနဲ့ငါ. သို့သော်, ငါအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အချိန်ကိုယူပြီးမှတခါ, ငါ့မျက်မှောက်ငါသည်ငါ့တပြင်လုံးကိုအသက်တာ၌ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အရပျကိုထက်ကွဲပြားခြားနားသောအရပ်မှဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်. ငါစိတ်ရင်းမှန်နဲ့သင့်ရဲ့ရှုထောင့်ကနေအမှုအရာကိုမြင်သောအခြိနျကာလကိုယူပြီးမတောင်းပန်ချင်, ငါစိတျထဲမှာကျေးဇူးတော်နှင့်အတူဤသူအပေါင်းတို့ကိုချဉ်းကပ်ဖို့လူတိုင်းကိုအားပေးချင်. ဒါဟာအဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်. ငါသည်ဤသီချင်းပို့စ်တင်ဘို့သင့်ကိုကျေးဇူးတင်, Derek မိုင်းနားကသူ့လွှတ်ဘို့, နှင့်ဤပြဿနာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောပြီနှင့်သူတို့၏ဉာဏ်ပညာကိုမျှဝေသူ 11Six သင်္ဘောသားအပေါငျးတို့သ.
Kentrel • ဒီဇင်ဘာလ 5, 2014 တွင် 1:58 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဤသီချင်းသည်လူပေါ်ခရီးစဉ် Lee ကအလွန်ချစ်မုသာမရှိ. ကျနော်တို့မြောင်းထဲကကြှနျုပျတို့ခေါငျးဆွဲထုတ်ဖို့သီချင်း၏ဤအမျိုးအစားလိုအပ်, ဘုရားသခင်သည်ငါတို့လုပ်ဖို့လိုလားဘယ်အရာကိုမြင်. ကိုယ့်ကဒီလူယောက်ျားကဲ့သို့သီချင်းတစ်ပုဒ်လုပ်ဖို့ငါ၏အမစ်ရှင်အပေါ်ပေါ့. ဘုရားသခငျသညျဤအခက်ခဲအချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးကူညီနိုင်ပါစေ.
အက်ဒွပ် • ဒီဇင်ဘာလ 5, 2014 တွင် 8:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါ Arkansas ပြည်နယ်အတွက်သေးငယ်တဲ့မြို့အတွက်တစ်ဦးအသင်းတော်၏သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့်ငါမသိသာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ရဲကရပ်တန့်ရမလို……..တော့ဘူး. ဒါကအမြဲတမ်းအမှုန့်မထားပါဘူး. ငါ့အစ်ကိုနဲ့ကျွန်မရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သေနတ်မှာကားတစ်စီးထဲကရဖို့ပြောသည်နှင့်ကျွန်တော်သမျှမြောက်ပိုင်း Wisconsin ပြည်နယ်အတွက်မြို့သို့မောင်းနှင်ခဲ့ခဲ့ကြသည်. ကျနော်တို့ခဲ့ကြသည် 19 သို့မဟုတ် 20 အသက်အနှစ်. ငါးနှစ်အစောပိုင်းကကျွန်တော်အိမ်ပြန်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပြီးရဲကားဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်တို့ကိုရပ်တန့်မတိုင်မီလုပ်ကွက်သုံးခုသို့မဟုတ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ကို trailed. သူတို့ကကျွန်တော်တစ်ဦးလုယက်မှုတချို့သံသယရှိသူတူကပြောပါတယ်.
ငါ kaa မှတဆင့် Hop ခရစ်ယာန်က Hip မှမိတ်ဆက်ငါသည်လည်းသင်တို့၏သီချင်းများအတွက်စကားများရန်အချိန်အားလုံးနားထောင်ရန်ခဲ့သည်. “တက်” အေး, အအေး, အအေး.
OtiatoMargy • ဒီဇင်ဘာလ 5, 2014 တွင် 10:06 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယေရှုရှိအဘယ်အရာကိုမိတ်ဆွေတစ်ဦး; ထမ်းအားလုံးငါတို့အပြစ်များနှင့်ဝမ်းနည်းခြင်း, ကျွန်တော်မျိုးအပေါင်းတို့သည်အဘယ်သူမျှမပြုသောပဌနာ၌ဘုရားသခင်မှအရာအားလုံးကိုသယ်ဆောင်ကြဘူးလို့ပဲ။. ဒါဟာခက်ခဲတဲ့ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျနော်တို့လုံးဝသူ၏ကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူအညီမဲ့ဆပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင့လုံလောက်သောထက်ပိုမိုကြောင်းကြားဖြတ်နိုင်. ကျနော်တို့အများကြီးမေးခွန်းများကိုမေးနိုငျ, စသည်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာမေးခွန်းထုတ်, သေးကျနော်တို့ကမျြးစာကိုရှာဖွေမှသာလြှငျဘုရားသခငျသညျပြီးသားသူ၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ပေးအပ်ထားပြီးအားလုံးအဖြေလက်လွတ်. ကျနော်တို့အစဉ်အဆက်သညျဘုရားသခငျလိုအပ်ကြလျှင်, ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကြောင်းကိုယခုဖွင့်, ကျွန်ုပ်တို့သည်စနစ်များကိုနားလည်သဘောပေါက်အဖြစ်ငါတို့ကျရှုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချ. ဘုရားသခင့လိုအပ်ချက်ကာလ၌အလွန်ပစ္စုပ္ပန်အကူအညီနဲ့ငါတို့ခိုလှုံရာနှငျ့ခှနျအားဖြစ်ပါသည်… ငါတို့မြော်လင့်သခင်ယေရှုကိုမှတဆင့်သမ္မာကျမ်းစာရဲ့ဘုရားသခငျသညျငါတို့သခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး၏မင်းသား၌တည်ရှိ၏, သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရာအရပျကိုယူသောဤအကြောင်းပြချက်ဒီတော့သေဖို့အတှကျကနျြောတို့ချစ်သူတို့အတွက်လက်ခံနှင့်မသက်ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မတူကွဲပြားမှုအခမဲ့သတ်မှတ်ထားခံရဖို့င်. ငါတို့သည်ဤနှုန်းမှာမလွှဲမရှောင်အခြားအဖြစ်အပျက်ဘို့စောင့်ဆိုင်းစရာမလိုပေ, ဘုရားသခင့်ထံသို့ပြန်လာမယ့်ပါစေ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာ. ကျနော်တို့ကိုယ်တော်ကိုစွန့်ပစ်ပေမယ့်သူကကျွန်တော်တို့ကို left ဘယ်တော့မှ. သူကစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိသည်, သူ၏သားသမီးတို့သည်အဘယ်သူမျှမအခွင့်အရေးများရှိသည်သောကျေးကျွန်အဖြစ်မျက်နှာပျက်ခြင်းရှိကြမဟုတ်သောကြောင့်ဒဏ်ရာများအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေရန်နှင့်မူပိုင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဂုဏျသိက်ခာရှိရှိများမှာ. ဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့အဘဖြစ်ပါသည်, ကျွန်တော်သူ့ကိုပိုင်, သူကကျွန်တော်သူ့ကိုလိုအပ်မယ့်တာဝန်ရှိဖေဖြစ်ပါသည်! သူကလူ့အခွင့်အရေးအပါအဝင်ကျနော်တို့လိုအပ်သမျှရှိပါတယ်!
Sammychris68@gmail.com • ဒီဇင်ဘာလ 5, 2014 တွင် 10:10 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
၎င်း၏အမေရိကန်ထဲမှာမသာ, ဒါကြောင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနေရာတိုင်းဖြစ်ပျက်…သူခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတစ်မူဆလင်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်အစ်ကိုဓာတ်ဆီအားဖြင့်သူ၏အပေါင်းအဘော်ကအစ်ကို alife မီးရှို့ရာဘယ်မှာငါသက်သေခံ, ဘယ်မှာ3ရာဇဝတ်မှုများအတွက် set ကိုမီးရှို့သူတို့ portharcourt နိုင်ဂျီးရီးယားထဲမှာမကျူးလွန်ဘယ်မှာအပြစ်မဲ့ကျောင်းသား, သတ်သေဗုံးဖောက်ခွဲမှုရာအရပ်ကိုကြာဘယ်မှာ, စစ်သားတစ်ဦးကနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်အသိုင်းအဝိုင်းအတွက်တစ်ဖွဲ့လုံးနိုင်ငံသားအသတ်ခံဘယ်မှာ, နိုင်ဂျီးရီးယားအတွက် bibble ဖြစ်ပျက်ကြရသောထူးဆန်းသောအရာတို့ကိုဖြစ်ပျက်သောတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ကျနော်တို့လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် ur ပဌနာလိုအပ်ပါတယ်…မူဆလင်နှင့်အတူ Living လွယ်ကူသည်မဟုတ်.
MargureteMensa • ဒီဇင်ဘာလ 5, 2014 တွင် 2:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဘာပဲ. ဒီနေရာမှာတစ်ဦးအကြံပြုချက်င်: quitcherb * tchin, ကြီးပြင်းနှင့်သင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗဟိုပြုခံစားချက်တွေကိုမှတပါးလူ့အဖွဲ့အစည်းမှအပြုသဘောတစ်ခုခုအထောက်အကူ. သူတို့ကလမ်းကျော်ကအဆင့်သတ်မှတ်ထားသောင်.
Marchauna • ဒီဇင်ဘာလ 5, 2014 တွင် 3:07 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Spokane အတွက် WinterJam မှာသငျသညျကွားလြှငျခွင့်ရခဲ့တယ်, ဝါရှင်တန်နှင့်အလွန်သင့်ရဲ့ဂီတအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခဲ့သည်. ယနေ့သင့်ရဲ့ website မှာထွက် Checked နှင့်ဖာဂူဆန်နှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့ post ကိုမွငျလြှငျ. ခွဲဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. ဘုရားသခငျသညျသာမကြာသေးမီကအမေရိကန်နှင့်အသင်းတော်အတွက်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှု၏အဖြစ်မှန်ငါ့မျက်စိဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်. သူကငါ့နှလုံးကိုဖျက်လေပြီ, ငါဒါငါသမ္မာကျမ်းရှိနိုင်ပါသည်နိုင်ပါတယ်သလောက်လေ့လာသင်ယူဖို့ကြိုးစားနေပါ၏, ဘုရားသခင့-ဂုဏ်ပြုခြင်းသဘောထားကို. သင့်ရဲ့ post ကိုနက်ရှိုင်းစွာငါ့ကိုငါ့ကိုအဘယ်သူ၏နှလုံးနှင့်မျက်စိသေးကိုဖွင့်ကြပြီမဟုတ်ညီအစ်ကို, ညီအစ်မနှင့်အတူမျှဝေဖို့တစ်ခုခုပေးသည်. တစ်ဦးဗြာအဘို့ဆုတောငျးလကျြ7ဘုရားကျောင်းနှင့်မိမိလူမှစိတျခမြှုကိုရောက်စေဖို့ညျသနျ့ရှငျးသောဝိညာဉျတျောအဘို့အ “အနောက်နိုင်ငံတွေ”. ငြီးငွေ့ကြီးထွားသို့မဟုတ်သေးတက်မပေးပါနဲ့…ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်သင်၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုလိုအပ်ပါတယ်, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, နှင့်စိတ်အားထက်သန်မှု.
fundmc • ဒီဇင်ဘာလ 5, 2014 တွင် 3:17 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အပြုသဘောသတင်းစကား Love. ကျနော်တို့ကြိုးစားနေကာလ၌သတင်းကောင်းဝေမျှဖို့သခင်ဘုရား၌အကြှနျုပျတို့ယုံကွညျခွငျးစိစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မှတ်မိဖို့ရှိသည်.
L ကို • ဒီဇင်ဘာလ 6, 2014 တွင် 11:33 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ်ကို, ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်. သူတို့သည်သင့်ကိုမုန်း၏င့်သည့်အခါအခြားသူများကိုမေတ္တာရှင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်. မိမိအအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်ရဲ့နှလုံးလက်ခံရရှိအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည် – တစ်ဦးစုစည်းတဦးတည်း – နှင့်ကိုယ်တော်နှင့်တူလမ်းလျှောက်, က hard င်အခါကလွယ်ကူမယ့်အခါ,. ငါသင်နှင့်သင့်မိသားစုနှင့်သငျသညျယရှေုကိုကောင်းစွာကိုချစ်သွားပြီင့်နက်နဲရာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
ကက်သလင်း • ဒီဇင်ဘာလ 7, 2014 တွင် 3:11 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါဒီကိုဖြတ်ပြီးလဲနှင့်ဘာတစ်ခုမှသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစစ်မှန်ကြောင်းပြောပါ, နှလုံးထဲကနှင့်သတိ. ငါသည်သင်တို့နှင့်အတူသင့်ရဲ့နာကျင်သက်သေခံများနှင့်၌လည်းညှိုးငယ်ခြင်းခံစားရ. ငါကြောင့်ငါ၏အကျား, မကအများကြီးဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်. ကျနော်တို့အထဲမှာဘာပျေါတှငျအခွခေံကလူကိုဝင်ရောက်သည့်အခါဖွင့်နေ့ကိုတည်ဆောက်ကြဖို့အရေးကြီးနေသည်စို့နှင့်လည်းမရှိသောအလှတရားကိုရှာဖွေ.
Margurete • ဒီဇင်ဘာလ 7, 2014 တွင် 12:27 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အဆင်ပြေလား, ဒါကြောင့်ကျွန်မဒီသွားပုံကိုကြည့်ပါ. ပဌမ, တန်ဆာရှိသမျှတို့ကိုငါ posted မှတ်ချက်များကိုသင်၏ဝမ်းနည်း sappy အျောဟစျသံကလေးသီချင်းမျက်နှာသာအတွက်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ posted ရကြဘူးခန့်မှန်း. ထိုအခါကသင်သို့မဟုတ်သင့်တစျခုမရပေါ်လာသော (အပြုသဘောဆောင်) မှတ်ချက်များကိုလူသားတွေ၏စာသားထောင်ပေါင်းများစွာသေးတဦးတည်းအလေးချိန်ကျော်လူတစ်အကြမ်းဖက်မှုများအပေါ်လူတစ်ဦးအနေဖြင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနေ့စဉ်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်အမြီးအမောက်ရရှိသွားတဲ့, ဖမ်းဆီးခုခံနေစဉ် asthmatic အနက်ရောင်သောသူသည်သေ, ကကင်မရာကိုအပေါ်ဖမ်းမိဖို့ဖြစ်ပျက်ယခုအခါငါတို့သည်သူ့ကိုအ sainted ပါပြီ, ပြိုင်ပွဲကဒ်ကစား, အလွန်အမင်းတပ်ဖွဲ့များနှင့်အမျိုးသားရေးအုံကြွမှုကိုခေါ်အဖြစ်တစ်နိုင်ငံလုံးအားလုံးရဲတပ်ဖွဲ့ရှုတ်ချပြောဆိုပြီး. ရုံတစျခုမေးခှနျးက: ဒီတစ်ဦးချင်းတစ်ဦးဥပဒေရေးရာမိမိကိုမိမိနဲ့သူ့မိသားစုများအတွက်လူနေမှုအောင်ရန်ခက်ခဲအဖြစ်ပဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးလျှင်, အစားတရားမဝင်ဥပဒေမဲ့လှုပ်ရှားမှုအေပျမဟုတ်ရင်ဓလေ့ထုံးတမ်းဖက်ရှင်ကိုသူနေဆဲယနေ့အသကျရှငျပါလိမ့်မယ်? အနည်းဆုံးငါတို့သည်သင်တို့၏ sappy မိမိကိုယ်ကိုသနားနှမြောမည်ဖြစ်ကြောင်း.
WhiteVictim • ဒီဇင်ဘာလ 8, 2014 တွင် 4:05 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ငါအမျိုးမျိုးသောတိုင်းရင်းသားများနှင့်နောက်ခံကနေလူငယ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်သူတစ်ဦးအဖြူသည်လူဖြစ်ကြောင်းကို. အခုအချိန်မှာ, 80% အုပ်စုများ၏အနက်ရောင်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်သင့်သီချင်းငါ့ကိုတော့လို့. ငါအုပ်စုထွက်ပေးရန်သင့် CD ကိုဖွင့်များစွာကိုမိတ္တူဝယ်ယူပေမယ့်မပိုခဲ့ကြ. သင့်ရဲ့သီချင်း၏တစ်ဖက် “ဒါဟာငါ့ကိုပါပြီနိုင်” သင်အမှန်တကယ်ပြောနေခြင်းဖြစ်သည်, “ဒါဟာသင်ပါပြီနိုင်” (လူဖြူ) အဘယ်သူသည်ငါ့ထံသို့ဤအမှုကိုပြုသောနိုင် (အနက်ရောင်ယောက်ျားသည်). သငျသညျစိတျနှလုံးအမှာအစစ်အမှန်ပြဿနာ WHITEwashing နှင့်အပြစ်ဖြစ်ပါသည်. ခရစ်ယာန်တစ်ဦးသည်အနုပညာရှင်အဖြစ်သင်ပိုကောင်းသိသင့်ပေမယ့်သငျသညျကိုအခြားသူများလုပ်နေတာဘာလုပ်နေပါလဲ: သင်သည်သင်၏ဂီတရောင်းငွေရှာဖို့တခြားသူတွေရဲ့သေဆုံးမှုအပေါ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြတယ်. သငျသညျအလ် Sharpton ထံမှသိကွဲပြားခြားနားကြသည်. အဆိုပါအဓမ္မပြုကျင့်မှု၏ဇာတ်လမ်းဖတ်ရှုပါ & အဖြူရောင်စုံတွဲ Channon ခရစ်ယာန်များ၏သတ်ဖြတ်မှု, 21, နှင့်ရည်းစားခရစ္စတိုဖာ Newsom, 23 အနက်ရောင်ဖြစ်ဖြစ်ပျက်သူတွေကို၏လက်ရက်. လူဖြူများ၏ကြောက်မက်ဖွယ်သေဆုံးမှုစာတမ်းများသို့မဟုတ်ရက်ပ်သီချင်းတွေကိုရောင်းကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဇာတ်လမ်းခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်လုပ်ဘယ်တော့မှမ. ဒါဟာသင်ပါပြီနိုင်ပေမယ့်ကျိန်းသေသူတို့ကိုဖြစ်ပျက်. ဒါကြောင့်, သင်သည်ထိုအကြောင်းကိုမနာသီချင်းဆိုကြဘူးဘာကြောင့်. မြျှောလငျ့စှာ, သင်ဤ posted ခံရဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုနှင့် posted အဖြစ်သာကျန်ရှိနေသေးကြောင်း.
တွမ် • ဒီဇင်ဘာလ 8, 2014 တွင် 10:54 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဝိုး. ဒါဟာသင့်ရဲ့ဘဝတစျခုလုံးဟာသားကောင်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်ရမည်. စိတ်ဆင်းရဲမှုဆက်ဆက်ကုမ္ပဏီချစ်သောသူ, သော်လည်း.
သင့်ရဲ့သီချင်းနီးပါးလည်းအစဉ်အဆက်ငါ့ကိုပြုတိုင်းဆိုးအရာစဉ်းစားငါ့ကိုကိုယ်အဘို့တောင်းပန်ပါတယ်ခံစားရလုပ်. သငျသညျငါ့ကိုအကြားကွာခြားချက်ကဘာလဲ? ငါအတိတ်ထဲကနေလေ့လာသင်ယူရန်ရွေးချယ်, နှင့်ပေါ်ရွှေ့. ဒီတစ်ခါလည်းငါမှားခဲ့. ဒီတစ်ခါလည်းငါပြစ်မှားခဲ့သည်. ဂရုမစိုက်ဘူး.
p.s. ငါအဖြူရောင်အထီးပေါ့, ငါသိပ်နေတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အဖြစ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်အတူထိပ်တိုက်တစ်ချိန်ကတရားစွဲဆိုခံရဘယ်တော့မှဖူး. အဲဒီအခြေအနေများအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှတဦးတည်းအဘို့အဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့်မည်သို့ငါသူတို့ထံမှသင်ယူ.
သောမတ်စ် • ဒီဇင်ဘာလ 10, 2014 တွင် 11:38 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ခရီးစဉ် Lee ကဒါအလင်း-skin ဖြစ်ပါတယ်, သူကအဖြူအဖြစ်လွန်သွားနိုင်ပါတယ်. သူ၏ဇနီးနှင့်ကလေးတွေလည်းရှာဖွေနေအဖြူများမှာ. ဘယ်လိုသူကယ့်ကိုအနက်ရောင်ဖြစ်သို့မဟုတ်အနက်ရောင်ကလူကဲ့သို့တူညီသောအတွေ့အကြုံရှိသည်ဆိုနိုငျသညျ.
ခရီးစဉ် Lee က • ဒီဇင်ဘာလ 22, 2014 တွင် 1:59 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဤမှတ်ချက်ကိုဒုက္ခသည်နှင့်သင် America မှာအနက်ရောင်လူများအတွက်ဘဝအကြောင်းကိုနားလည်ကြဘူးဘယ်လိုအနည်းငယ်သာပြသ
ရီ • ဒီဇင်ဘာလ 21, 2014 တွင် 4:14 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ယနေ့တွင်, နှစ်ခု NYPD အရာရှိများ၏သတ်ဖြတ်မှုကတည်းက, ငါနောက်ဆုံးတော့ငါအဲရစ် Garner_I ၏ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခဲ့သောရှာဖွေမယ်လို့ထင်, ငါတစ်ခါသာကစောင့်ကြည့်ကိုင်တွယ်နိုင်; ငါလုံးဝ dis-ယုံကြည်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကို!! အဆိုပါမျက်ရည်စီးဆင်းနေကြတယ်….ဘယ်လို fuck ဆိုတဲ့အတွက်ရဲများကဝံ့, ဘယ်လိုသူတို့ကို Dar !! ငါအဲရစ်ရဲ့မိသားစုများအတွက် SO စိတ်မကောင်းပါဘူး, နှင့်မိတ်ဆွေများ. ငါသူအမှန်တကယ်ကိုကြီးစွာသောသောသူဖွစျကွောငျးကိုနားလည်, လှပသော, ပေးကမ်းဝိညာဉျသ. အဲရစ်နဲ့ရော rip.
ငါ White ကအမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းကို, 50 ရဲ့ငါ့အစောပိုငျးတှငျ, ငါအဲရစ်လုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်မှာကဲ့သို့မြို့ကြီးများနေထိုင်ခဲ့ဖူးပါဘူး. ငါမဆိုနည်းလမ်းဖြင့်အခွင့်ထူးခံဖြစ်ကြောင်းကို; ငါကွိုးစားအားထု, ရုန်းကန်မှုများအဆုံးတွေ့ကြံအောင်ပါပြီ; ငါအလုပ်ရပျ၌ကမှားပါပြီ; တကယ်အနိုင်ကျင့်, ပစ်ခတ်, တစ်ဦးထက်ပိုအခါသမယတွင်; ငါမအခွင့်အရေးရှိသည်, အဘယ်သူမျှမဂရုစိုကျတယျ, အဆိုပါ EEOC, တစ် crock ဖြစ်ပါသည် ….! ငါ့အသက်ကိုတစ်လျှောက်လုံး, ငါ cocky ရဲအရာရှိနှင့်အတူဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးအတွက်တစ်ဦးပြေးခဲ့ကြ; ဒါပေမဲ့, ငါသညျလညျးကောငျးမြားစှာရဲအရာရှိနှင့်အတူအတွေ့အကြုံများရှိခဲ့ပါပြီ. Eric ဆန့်ကျင်ယူလုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်လုံလောက်အောင်ကောင်းသောဆင်ခြေဆင်လက် NO ရှိပါတယ်; သူ SO ချိုးဖောက်ခဲ့သည်, နှင့်အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦး cocky ရဲအရာရှိများ၏လက်ဦးသေဆုံး. ငါကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်အထဲတွင်ပျက်ကွက်နားလည်လို့မရပါဘူး; ကိုယ့်ငါ့ဦးခေါင်းလှုပ်, ကျွန်မဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြပါ; သတင်းကြည့်နေစဉ်, နှင့် stories_it နားထောင်ပြီးငါ့ကို repulses! ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကအရောင်မမြင်ရဖို့ကျွန်မကိုကြီးပြင်း(s ကို)… ငါတို့ရှိသမျှသည်တဝတည်းဖြစ်ကြ၏; ငါတို့ရှိသမျှသည်အသက်တာ၏ကွဲပြားခြားနားသောလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေလာကြဘူး; ကျွန်တော်တို့ကိုများစွာသောရုန်းကန်မှုများရှိ, ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအများအပြားရုန်းကန်မှုများ; ဒါပေမယ့်တူညီတဲ့အသှေးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးပြန်ကြောမှတဆင့်စီးဆင်း. ပေမဲ့, ငါအပေါ်ခဲ့ရဖူးပါဘူး “ပညတ်တရား၏မှားယွင်းတဲ့ဘက်;” ငါ့အစ်ကိုရှိပါတယ်, သူကအဖြူရောင်ဖြစ်ပါတယ်မှ, ထောင်ထဲမှာအချိန်အတန်ကြာလုပ်ခဲ့တယ်(10yrs) အချိုးအစားထဲကလုံးဝလွခဲ့ကြသည်အချို့သေးပြစ်မှုများအတွက်; အခုသူတွေအကြောင်း 15yrs ထွက်ခဲ့သည်; သူကခဏအဘို့အဘယ်မှာအနေနဲ့ခြေကျင်းလက်ကောက်ခဲ့(2yrs,) ဒါကြောင့်ကောင်းစွာသူ့ကိုမသိရဖို့ဒေသခံရဲများကအဘို့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ခဲ့သည်, သူ့ကို hassle, အဆက်မပြတ်, ထိုအချိန်မှာ. ဒါဟာ 15yrs ခဲ့ရဲ့, NO ကိစ္စများနှင့်အတူ, သူနေဆဲယနေ့တိုင် hassled ရရှိ, ကသနားစရာဖြစ်ပါသည်; သူကဆဲရာဇဝတ်မှုများအတွက်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်, သူသည်ကောင်းစွာသူ့အချိန်ပြီးစီးထားပြီးပေမယ့်. ဒါဟာတစ်က Black ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာအားလုံးဖြစ်ပါတယ်. ယနေ့ဤမျှလောက်မှားယွင်းတဲ့အရာခပ်သိမ်းနှင့်အတူရှိပါသည်, နှင့်အခြေခံအားဖြင့်, ကျနော်တို့တကယ်အခွင့်အရေးများရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး…ကျနော်တို့ကနည်းမှန်လမ်းမှန်မပြုလျှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်မှား, တချို့လမ်းသို့မဟုတ်အခြားအတွက်အပြစ်ပေး. ပေမဲ့, ဒီလောကအတွင်းအများအပြားမကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်, အခြားသူတစ်ဦး၏အသက်အဘို့နည်းနည်းနှင့် ပတ်သက်. ရှိသည်သောတဦးတည်းရဲ့, သူခိုးတွေ, အားလုံးအရောင်လူရမ်းကား; ကျနော်တို့ရာဇဝတ်မှုကိုတိုက်ကိုကူညီရဲအရာရှိလိုအပ်ပါတယ်; သူတို့နေ့ရက်များစွာရှိအသက်ရှင်တော်မူသည်အန္တရာယ်ပြုပါ; ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှု, အင်အားကသူတို့အဆင့်ကို, ကလူကိုနားထောင်၏မရှိခြင်း, cockiness ၎င်းတို့၏အသိ; ကအပြစ်ရှိကြောင်းများမှာအများဆုံးအမြဲသင်တို့တွင်အမှုဖြစ်ပါသည်, အပြစ်မဲ့သက်သေပြချက်သည်အထိ, သူတို့ရဲအရာရှိတဦး၏ထက်လျော့နည်းများမှာကဲ့သို့အလုံးကိုဤလူမြိုးကိုကျော်လူတွေကိုကုသလျက်ရှိ(“ဥပဒအရာရှိတစ်ဦး။”) အိုင်တီရပ်ရန်ရမည်! ကျွန်တော်တို့၏ “ကြီးမားသော” လူမျိုးသည်, ဤအချိန်တွင်တကယ်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောမဟုတ်ပါဘူး…အစိုးရနှင့်စတင်, ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ဆင်းစီး.
နောက်ကျောအဲရစ်မှ, နောက်တဖန်, အရမ်းစိတ်မကောင်းပါဘူး, နှင့်သူ၏မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကိုများအတွက်ဝမ်းနည်း. အရမ်းကံမကောင်းအဖြစ်အပျက်…ငါဇွဲမှတဆင့်သူ့မိသားစုတချို့တရားမျှတမှုကိုရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါတယ်, ၏သင်တန်းကအဲရစ်ကိုအစားထိုးဘယ်တော့မှနိုင်.
ရီ • ဒီဇင်ဘာလ 21, 2014 တွင် 4:20 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
AJ • ဧပြီလ 8, 2015 တွင် 9:49 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ငါတောင်ရှိရာကိုစတင်မသိရပါဘူး. ငါခံစားမိခြင်းနှင့်ကိုယ့်ကိုတောင်အမေရိကန်ဘူးပေမယ့်အနက်ရောင်ဖြစ်ခြင်းအတိအကျဘယ်လိုဖွင့်, ကလူညှဉ်းဆဲခြင်းကိုခံရပြီးတော့တောင်မှအခွင့်အာဏာများကသတ်ဖြတ်ခံရသည်ဟု သိ. ပဲနှလုံး wrenching ဖြစ်ပါသည်, ပြီးတော့တူညီတဲ့အခွင့်အာဏာထိုကဲ့သို့သောနှင့်အတူဝေးရတဲ့ကြောင်းသိရန်ဆိုတရားစီရင်ရေးစနစ်ကိုယုံကြည်ဖို့ကဒါခက်ခဲစေသည်, အမှန်. ငါပါဝင်ပတ်သက်မိသားစုများနှင့်အတူစာနာခြင်းနှင့်ထိခိုက်, သားကောင်များသို့မဟုတ်ကျူးလွန်သူဘက်မှနှစ်ဦးစလုံး.
Tammy • ဧပြီလ 9, 2015 တွင် 6:31 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
Kianna • မေ 20, 2016 တွင် 4:35 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
အင်ဒိုနီးရှားမှာတော့အွန်လိုင်းအသိမှတ်ပြု • ဇူလိုင်လ 17, 2017 တွင် 5:39 ညနေ • ပြန်ကြားချက်
ဂီတမှတ်စု • ဇူလိုင်လ 19, 2017 တွင် 12:25 နံနက် • ပြန်ကြားချက်
ဒါပေမဲ့, သူသည်မိမိဂီတကိုစစ်မှန်တဲ့တည်းခိုနှင့်ကျော်ရေးသားဖို့ရှည်လျားအလုံအလောက်နေထိုင်ခဲ့ 800 သီခငျြးမြားနဲ့သူ့ရဲ့ဂီတတက်နားမထောင်
ပထမဦးဆုံးအတန်းနိုင်အောင်ထံမှ choir ရပ်တည်ချက်မှ, ဒါကြောင့်ယခင်ကရှိခဲ့ဘယ်မှာ
ပိတ်ပင်ထားခဲ့. အားကောင်းတဲ့ကွန်ပျူတာနှင့်အတူ, အချို့သော MICS, ဒစ်ဂျစ်တယ်အသံကို Workstation, နှင့်အနည်းငယ် Know-ဘယ်လို,
ထိုအခါ, အင်တာနက်ထွန်း, ဘရော့ဒ်ဘန်း, ချုံ့အသံဖိုင်ကို formats နှင့်ပိုပြီး